အပြိုကွီးရဲ့အထူးလကျဆောငျ – My Blog
ကမြ မသီသီမွငျ့ အသကျသုံးဆယျ့ ငါးရှိပွီ။ကမြရနျကုနျကိုရောကျလာ တယျ။ဇာတိကတော့အညာက၊အညာသူဆိုပွီးမဲမဲသဲသဲ မဟုတျဘူး။ အသားတော့ဖွူယုံမကဝငျးတယျ။ လှလားလို့မေးရငျတော့ရှာမှာတော့ ကှမျးတောငျကိုငျစာရငျးမဝငျပမေယျ့ရှကျ ကွမျးရကွေိုအဆငျ့ပေါ့။အ သားဖှေးယုံလေးထိနျးထားနိုငျတယျ။ပွောစရာအပွဈကတော့နို့သေး တာတဈခုပဲ။ဒီအသကျအရှယျ အထိ အပြိုကွီးဘဝနှငျ့နခေဲ့တာ။ဘာစိတျ မှတော့မရှိခဲ့ဘူး၊ခုဒီအရှယျရောကျမှ ကမြစိတျကတမြိုးကိုဖွဈလာတယျ။ဖွဈပုံကဒီ လို။မောငျလေးကရနျ ကုနျမှာအိမျထောငျကတြယျ။သူတို့ကတိုကျခနျးငှားနကွေတာ။သူ တို့မှာသမီးလေးတဈယောကျရှိတယျ။ကမြ တူမလေးပေါ့၊ကမြတို့ရဲ့အသဲ လေးလေ။တနှဈနီးနီးရှိပွီ၊အဲဒီက နပွေီးတော့ကမြကိုရနျကုနျကိုချေါ တယျ။ဘာလို့ချေါလဲဆိုရငျသူ နိုငျငံ ခွားသှားရမယျ့ရကျနီးလာလို့တဲ့။
သူ့သမီးနှငျ့သူ့မိနျးမကိုထားခဲ့ရမှာ စိတျမခလြို့ဆိုတော့ကမြလိုကျသှား ရတယျ။ရှာမှာအမနေဲ့ညီမကိုထား ခဲ့ရတယျ။အဲဒီမှာကြ မကသူတို့နတေဲ့မွို့ကိုလိုကျလာရတဲ့အခါသူတို့ တိုကျခနျးကHallခနျး၊ငှားနတော လဲဖွဈလတေော့ အခနျးတှကေနျ့မထားဘူး လိုကျကာခနျးဆီးလေးပဲကာထား တယျ။ကမြလညျးခနျးဆီးရှအေိ့မျ ရှမှေ့ာပဲအိပျရတယျ။ကမြမောငျက နိုငျငံခွားထှကျခါနီးတော့ အမရှိနေ တာတောငျမရှောငျဘူးရှငျ့။ညဆိုသူ တို့လိုးသံတဖတျဖတျနှငျ့ကမြယောကျမကလညျးတအားညညျးတယျ။ အမှနျဆိုရှာ မှာမကွားဖူးတဲ့အရာ တှေ၊အစကတော့ရှကျတာပေါ့၊ အသံကွားတိုငျးရငျတုနျပနျးတုနျ အမွဲဖွဈရသညျ။။
သူတို့လုပျရငျကွားရတဲ့အသံတှကေ ဒါမြိုးမကွားဖူးတဲ့ကမြအတှကျ တော့တမြိုးကွီးပဲရှငျ့။တပွှတျပွှတျ စုပျသံတှလေညျးကွားရ တယျ။ အမှနျဆိုရငျကမြရှိတော့မောငျလေး ရှောငျရမှာ၊ဒါပမေယျ့သူနိုငျငံခွား သှားရတော့မယျဆိုတော့ရိက်ခာယူ သညျ့သဘော လားမသိပေ။။ကမြအိပျနပွေီဆိုပွီး လိုးကွသညျ။တပွှတျပွှတျနှငျ့စုပျသံ ကွားရသညျ။ကမြကခကျြခငျြးအိပျ ပြျောတတျတဲ့လူမြိုး မဟုတျတော့ သူတို့ကမသိပဲလုပျကွတာ ကမြစိတျထဲတဈခါမှမဖွဈဖူးတဲ့ခံ စားမှု့တှဖွေဈနမေိတယျ။အသံတှေ ကွားပွီးကမြ အဖုတျဆိုလညျးစိုရှဲ နသေညျမှာအမွဲတစလေိုဖွဈနေ သညျ။တဖွေးဖွေးနဲ့ကမြစိတျတှေ ဖောကျပွနျနမေိတယျ။တကယျကိုမယိုးမ ယှစိတျတှဖွေဈနတေယျ၊အဲဒီ စိတျသာဖွဈတာလငျကတြော့မယူ ခငျြဘူး၊လငျယူသားမှေးဒုက်ခတှကေိုမခံနိုငျပါ။စိတျပါလာတိုငျး ကိုယျ့ဟာကိုပှတျမိလာသညျ။သို့သျောအား မရပေ။မောငျလေးမရှိတော့ယောငျးမနှငျ့အတူအိပျနရေသညျ။လှတျလပျမှု့လညျးမရှိ ပေ။ယောငျးမသိ၍အရိုအသတေနျမညျကိုလညျးစိုးရိမျရ သညျမဟုတျပါလား။ ကမြလဲယောငျးမဆီရောကျနသေညျမှာတလပွညျ့ တော့မညျ၊အလုပျက မယျမယျရရမရှိ၊ကလေးထိနျးထ မငျးခကျြရုံသာဖွဈတော့ကမြလညျးအလုပျမရှိလြှငျမနတေတျလရော၊ အလုပျတဈခုလုပျရနျကွိုးစားရ တော့သညျ။
“ယောငျးမရေ နငျ့ယောကျြားလုပျစာ ကနငျတို့မိသားစုအတှကျပေါ့၊ငါလဲ အမတေို့ကိုထောကျပံ့ဖို့တဈခုခုလုပျ ရမယျ” “ယောငျးမ ရယျ၊ဒီမှာကဘယျအလုပျ ရှိလို့လဲ” “ဒီလိုပဲအရငျကရှာမှာငါကှမျးယာ ရောငျးခဲ့တာပဲ၊အဲဒီဟာပွနျလုပျမယျ” “ယောငျးမဟိုရှကေ့ တိုကျတှပွေနျ ပွငျမှာတဲ့လူတှရေောကျလာကွ တယျ” “အေးငါလဲမွငျတယျ။အလုပျသမား တှလေဲရောကျလာကွတယျ” “အငျး တှတေ့ယျမိသားစုသုံးလေး ဦးပဲ” “အဲဒီလူလောကျနဲ့တော့မဟုတျ လောကျဘူး၊အမြားကွီးလာကွမှာ” “အငျးဟုတျလောကျတယျ” “အဲဒါယောငျးမခကျြခငျြးဆိုငျဖှငျ့ လိုကျရငျအဆငျပွမှောပဲ” “အေးမဆိုးဘူး၊မနကျဖွနျပဲဖှငျ့မယျ” မသီခကျြခငျြးဆိုငျဖှငျ့ ရနျနရောကို ရှငျးလငျးလိုကျသညျ။ဆိုငျဆောကျ ရနျအလုပျသမားမြားကိုအထူးရှာ ရနျမလိုပဲအသဈရောကျနသေော အလုပျသမား မိနျးမကိုသှားပွောရာ လကျသမားမြားကခကျြခငျြးလိုကျ လာကွပွီးဆိုငျခုံလုပျပေးသညျ။ အလုပျသမားမိနျးမမြားကစပျစုကွ သညျ။မိမိအပြိုကွီးမှနျးသိပွီး “အပြိုကွီးကခှငျရှာတာတျောလိုကျ တာ” “ဟငျဘာလို့လဲ” “ကမြတို့အလုပျသမားကခွောကျ ဆယျလောကျရှိတယျ။ဆရာအပါအ ဝငျကှမျးစားကွတာလေ၊ဆိုငျကနီး တော့ဒီဆိုငျပဲအားပေးကွမှာ” “ဟုတျလား” မသီ အားတကျသှားသညျ။
“ဆရာကအဝေးကွီးကှမျးဝယျထှကျ တာမကွိုကျဘူး၊သူကထှကျဝယျခိုငျး မှသှားရဲကွတာ” “လာပို့ပေးရငျကောငျးမယျ” “ငါးရာဖိုး အထကျပို့ပေးမယျဟေ့” “အဆငျပွတောပေါ့” “ဆရာဆီပို့ရငျသတိထားပေါ့” “ဘာလို့ သူကလူပြိုလေ၊ဟီး ဆဲတာနဲ့ကွုံမှာစိုးလို့” “သူကဆဲသလား” “ဆဲတာပေါ့” “နငျတို့တှပွေနျမပွောဘူးလား” “ဘယျပွောရမလဲ၊သူဆဲတာကလဲ ရယျရတယျ” “ဟမျ ဆဲတာ ကရီရတယျဟုတျလား” “မနာအောငျဆဲတာ” “ဘယျလိုဆဲတာလဲ” “ညဈတီးညဈပတျတှေ” “အယျ” ဆိုငျဖှငျ့ပွီးနှဈရကျခနျ့အထိ သူတို့ဆရာနှငျ့မတှရေ့ပေ။သို့သျောအခနျး တခနျးရှငျးလငျးနသေညျကိုတှရေ့ သညျ။ထိုကွောငျ့စပျစုကွညျ့ရပွနျ သညျ။ “နငျတို့ ဟိုအခနျးဘာလို့ရှငျးတာလဲ” “မနျနဂြောဆရာရဲ့ရုံးခနျးလေ” “သူဌေးကမလာဘူးလား” “ဆရာလားသူကအလုပျပိုမြား တယျ”မနျနဂြောဆိုတာလဲဆရာ့ညီလေ”တဖွေးဖွေးနှငျ့အလုပျသမားမိနျးမ မြားနှငျ့ရငျးနီးလာသညျ၊ထိုအလုပျ သမားမိနျးကလေး ထဲတှငျသှကျ သှကျလကျလကျနဲ့တဈယောကျပါ သညျ။စကားပွောလြှငျညဈတီးညဈ ပတျပွောသညျ။
“ဟကေ့ောငျမ အခုမှဈေးသှားတာ လား” “ဟုတျပါ့အပြိုကွီး မနညေ့ကငါ ယောကျြားကွောငျ့မအိပျရဘူး” “ဟငျ နငျ့ယောကျြားမူး နလေို့လား” “ဟုတျတယျ မူးပွီးမပွီးတော့ဘူး” “ရဈနလေို့လား” “ရဈတာမဟုတျဘူးအပြိုကွီးရေ၊ ဘုတာ၊ဘုတာ” “အမျ ဘာ လဲဘုတာ” “အဝှာလုပျတာ” “အယျ ဒီကောငျမတော့” “ဟုတျတယျ၊မနညေ့ကတော့တပွား သောကျလို့ပုံမှနျပဲ၊တလုံးသာ သောကျရငျ မှောကျရော” “အယျ” “ကမြယောကျြားကတပွားတနျလေ””ပေါကျပေါကျရှာရှာပွောတော့မယျ နငျဈေးနောကျကြ နပွေီသှားတော့” အဲဒီကောငျမကိုမနညျးနှငျထုတျ လိုကျရသညျ။မဟုတျရငျပဈြပဈြနှဈနှဈပွောတော့မညျ။မောငျလေးမရှိတာ့အသံ တှမေကွားရတော့ပမေယျ့ဒီလိုမြိုးကိစ်စတှပွေနျကွားရတော့ စိတျကပွနျကွှလာသညျ။ ဆိုငျပွနျရောငျးနတေုနျးကားတဈစီး ဝငျ လာပွီးလူတဈယောကျဆငျးလာ ကာရုံးခနျးဆီသို့သှားသညျကိုတှေ့ လိုကျရသညျ။အလုပျသမားခေါငျး ဆောငျမြားလညျးနောကျက လိုကျသှားကွရာမနျနဂြောဆိုသူရောကျလာမှနျးသိလိုကျသညျ။
ခနနပွေီးအလုပျထဲကိုသှားကွသညျ။အလုပျသမားမြားလညျးလိုကျကွ ပွီးနာရီဝကျခနျ့ကွာသျောပွနျဆငျး လာသညျ။ခပျဝေးဝေး ဖွဈနေ၍သေ ခြာကွညျ့၍မရပေ၊စပျစုခငျြလာ သညျ။ထိုအခြိနျတှငျအလုပျသမား တဈယောကျ၏မိနျးမကကှမျးတဈ ထောငျဖိုး လာမှာရာယာထားလိုကျ မညျဟုပွောလိုကျသျောလညျးရုံး ခနျးကိုလာပို့ရနျပွောသှားသဖွငျ့ရုံး ခနျးဆီသို့သှားပို့ရသညျ။စပျစုခငျြ သညျနှငျ့အတျောပငျဖွဈသညျ။ ကမြကှမျးသှားပို့သောအခြိနျမှာထိုလူဖုနျးဆကျနသေညျ။ထို့ကွောငျ့မသီအထဲဝငျမသှားသေးပဲ အခနျးဝကနစေောငျ့နားထောငျနလေိုကျသညျ။ထိုဆရာဆိုသူကဖုနျးဆကျသူအား ဆဲနသေညျ။ “အေး ဟုတျတယျလီးပဲ၊အဲလောကျ ငတျပွတျနရေငျမငျးတို့မိနျးမဟာ တှလှေီးပွီးယူလာခဲ့ပါလား” မသီကြောခမျြးသှားရသညျ။ “ငါလိုးတှသေောကျလုပျကလြကျ ကြောမတငျးဘူး၊ဟိုဟာမြိုးကခြွေ ဖြားပါထောကျတယျ” ဘာတှတေော့မသိပေ၊ပွောနတော ကတော့တျောတျောဒေါသထှကျပွီး ဆဲနပေုံပါပဲ ဖုနျးဆကျပွီးတော့စာရငျးစာအုပျကို ကောကျကိုငျပွီးကွညျ့နခြေိနျမသီရုံး ခနျးအထဲသို့ဝငျလိုကျသညျ။
“ဘာကိစ်စရှိလို့လဲဗြ” “ဟိုလကှေမျးယာလာပို့တာ” “အော ၊ဟုတျကဲ့ထားခဲ့လအေမ” မသီကှမျးယာကိုထားပွီးသုတျသုတျနဲ့ပွနျ ထှကျခဲ့ရသညျ။ထိုသူကအ သားမဖွူသျောလညျးညိုသညျ့ ဘကျမရောကျ၊နလေောငျသလိုဖွဈနသေညျ့မကျြနှာနဲ့ရုပျကမခြောသျော လညျးယောကျြားပီပီသသနှငျ့ဖွဈ သညျ။နှုတျခမျးမှေးမြားရိတျထား ပမေယျ့အနညျးငယျစိမျးနသေညျဟု ထငျသညျ။တဈခါတဈခါ လညျး သူ့အကိုဖွဈသူသူဌေးလာတတျ သညျ။သူဌေးလာလြှငျလဲနာရီဝကျ ခနျ့သာနတေတျသညျကိုမသီသတိထားမိသညျ။သူ့အကို ရောကျသညျ့အခြိနျတော့မသီကိုကှမျးလာမပို့ခိုငျး တတျပေ။ ဒီလိုနဲ့ကှမျးယာပို့ရငျးရငျးနီးလာ သညျ။သူ့နာမညျကကိုမိုးမွငျ့။မသီ ထကျငယျသညျ။မသီစကားပွောရဲလာသညျ။တနတေ့ော့မသီစပျစုကွညျ့သညျ။ “ကိုမိုးမွငျ့တို့ကပွောတော့လဲပညာ တတျပွော တာကလဲကွမျး လိုကျတာ” “ဟုတျတယျဗြ။ကနြျောအုပျခြုပျနတေဲ့သူတှကေပညာတတျတှမှေမ ဟုတျတာ။ကွမျးကွမျးလေးပွော မှအဆငျပွတေယျ၊တျော တနျရုံပွောရငျပနျးနဲ့ပေါကျသ လောကျပဲထငျနကွေတာ” “မသီတော့ကတြော့နားထောငျရ တာတမြိုး ကွီးဖွဈနတောပေါ့” “ခငျမြားကမိနျးကလေးလေ၊ပွီး တော့အပြိုကွီး၊ကနြျောတို့အလုပျ မှာကယောကျြားလေးတှလေေ၊ဒီလို ပွော မှမသာတှကေရတာ၊ယောကျကြားလေးရှိတဲ့နရောကဒီလိုပါပဲ၊ဟိုကိစ်စတော့နညျးနညျးပါတာပေါ့”
“အမလေးဒီလိုကွီးလား” “ဟုတျတယျ” ကမြလညျးအားနရေငျသူ့ဆီကှမျး ယာသှားပို့တယျ။သူကပိုကျဆံပေး ပါတယျ။ကမြက အလကားကြှေး လညျးမစားပါ။ထို့ကွောငျ့ပငျ “ကိုမိုးမွငျ့ကမြဆေးခပျထားမှာ ကွောကျလို့လား” “ကနြျောကဆေးမတိုးဘူး၊ခငျ မြား ဆေးခပျလဲခငျမြားပဲခံရမှာ” “အမလေးမခပျရဲပါဘူးရှငျ” တကယျတော့သူ့အလုပျသမားမြား လာရောကျကှမျးဝယျကွ၍သာ ဆိုငျကရောငျးရသညျ။ထို့ကွောငျ့ သူတို့ကိုကြေးဇူးတငျ၍အလကား ကြှေးခွငျးဖွဈသညျ။ ကှမျးယာဆိုငျဖှငျ့ထားတာဆိုတော့ လဲ ယောကျြားလေးတှလောကွတာ ပေါ့။အပြိုကွီးဆိုတော့လဲရိသဲ့သဲ့ တော့အလုပျခံရတယျ။လှနျလာတဲ့အခါကမြလဲအျောပဈတယျ။ အဲဒီလိုလူတှမေရောငျးရလဲနပေါစေ ပေါ့။တဖွေးဖွေးနဲ့ကမြကှမျးယာ ဆိုငျလေးရောငျးကောငျးလာတယျ။ ပိုကျဆံလေးစုမိလာ တာပေါ့ တနကေို့မိုးမွငျ့ဆီကိုကှမျးယာသှား ပို့ရငျး “အပြိုကွီးဟိုနကေ့ရနျဖွဈနတော ကွားလိုကျတယျ” “ဒီလိုပဲလေ” “ဟိုကမူး ရူးပွီးတဈခုခုလုပျသှားရငျဘယျလိုလုပျမလဲ”
“လုပျလို့ရမလား၊ပွနျခမြှာပေါ့” ကမြလညျးအညာသူပီပီပွနျပွော လိုကျတယျ။ “ခငျမြားဘျောဒီနှငျ့ဗြာပွနျလုပျလို့ ဘယျလှယျမ လဲ” “အမယျလူကပိနျပမေယျ့အားရှိ တယျ” “လကျတဖကျနှငျ့ဆှဲရမျးလိုကျရငျ တောငျလှငျ့ထှကျသှားမယျ့ပုံကမြား” “လူမြား အထငျသေးလို့၊ရှငျတို့လို ဘီယာဖောဖောနသေူမှတျနလေား” “ဟောဗြာဘီယာဖောလားဘာလား သိရအောငျခငျမြားကိုလကျ တဖကျ နှငျ့တှနျးလှဲလို့ရတယျ” “အံမယျရမယျထငျလို့လား” ကိုမိုးမွငျ့ထလာပွီးကမြလကျကိုတ ခကျြကိုငျလိုကျကာ “ရုနျးကွညျ့ လိုကျလေ” မညျသို့မြှရုနျးမရပေ။ရုနျးရငျးပငျ သူ့ရငျခှငျထဲရောကျသှားသညျ။ သူ့ရငျခှငျထဲရောကျပွီးကမြဖငျကို သူ့ဟာကွီးနဲ့ ထောကျမိပွနျသညျ။“အာလှတျတော့ကိုမိုးမွငျ့၊လူတှေ မွငျမယျ” “ဘာမှမစိုးရိမျနဲ့ကနြေျာ့ရုံးခနျးကလူမမွငျရပါဘူးဗြာ” လူမွငျမှာ ပဲစိုးရိမျမိသညျ။ကမြစိတျ တှတေမြိုးကွီးဖွဈသှားရသညျ။ကို မိုးမွငျ့ကမြအပျေါမရိုးသားမှနျးသိ သှားရသညျ။သို့သျောကမြစိတျမ ဆိုးမိပေ။နောကျနတှေ့လေဲကှမျးယာ သှားပို့မွဲပါ။တနကေို့မိုးမွငျ့အလုပျ သမားတှကေိုပိုကျဆံရှငျးသညျကို တှသေ့ညျ။ATMကဒျ ကိုမွငျလိုကျ ပွီးကမြလညျးပိုကျဆံကိုစုကာATM ကဒျထဲထညျ့ထားလြှငျကောငျးမညျ ဟုတှေးလိုကျသညျ။
“ကိုမိုးမွငျ့ATM ကဒျလုပျရတာလှယျလား” “လှယျပါတယျ၊တခြို့ဘဏျကစောငျ့ ရတယျ၊တခြို့ဘဏျကတဈခါတညျး လုပျပေး တယျ” “ကမြလဲATMကဒျလုပျခငျြတာ” “မွို့ထဲမှာလုပျရမှာပဲ၊ဒီမှာစကျတှေ ပဲရှိပွီး၊ဘဏျမှမရှိတာ” “ကမြဘဏျကိုသှားရမှာ လား” “ဟုတျတယျ၊လူကိုယျတိုငျသှားရ မယျ”“ငှစေုရငျကော” “ငှကေလှဲပေးလို့ရတယျလေ” “ဟုတျလားကမြလဲATMကဒျလုပျ ခငျြတယျ” “မွို့ထဲသှားလုပျလေ” “ကမြမွို့ထဲမသှားတတျဘူး” “အဲဒါဆိုရငျကနြျောမနကျဖွနျဘဏျသှားမှာ၊လိုကျခဲ့လေ” “မနကျဖွနျ ကိုမိုးမွငျ့သှားမယျ့အခြိနျ ပွော၊ကမြလိုကျမယျ” “လိုကျခဲ့လေ” “ကမြဒီကတော့မလိုကျရဲဘူး၊လမျး ထိပျကစောငျ့မယျ” “ပွီးရော” ညကတြော့ယောငျးမကို “ယောငျးမ ငါငှစေုစာအုပျလုပျမလို့ မွို့ထဲခနသှားမယျ၊ဆိုငျခနစောငျ့ ပေး” “ဘဏျတှကေကွာတယျ နှျော”“အေးယောငျးမပွီးတာနှငျ့ပွနျလာခဲ့မယျ” “အငျးယောငျးမ” မနကျကတြော့ရှဈနာရီလောကျကမြလမျးထိပျကိုထှကျတယျ၊ကို မိုးမွငျ့ဆီဖုနျးဆကျတော့ကိုမိုးမွငျ့ကသူ လာနပွေီပွောတယျ။နာရီဝကျ လောကျနောကျကပြွီးမှရောကျလာ တယျ။ကမြဗိုကျထဲ မနကျကစားထားတာကရဈနပွေီ။ကားပျေါရောကျ ပွီးလမျးတဝကျလောကျမှဝမျးက သှားခငျြလာတယျ
“ကိုမိုးမွငျ့ဒီနားလကျဖကျရညျဆိုငျ လေးဘာလေးရှိလား” “ဒီနားမှာလကျဖကျရညျဆိုငျမရှိဘူး လေ၊ဘာလုပျမလို့လဲ” “ကမြဗိုကျနာ လာလို့”“ဟောဗြာ” ကနြျောတနရောရပျပေးမယျ။ “အာလမျးမကွီးမှာ” “ကွံကွံဖနျဖနျ ခငျမြားကလညျး လမျးမကွီးပျေါရပျမလား” ကိုမိုးမွငျ့ကကားမောငျးရငျးဟို ကွညျ့ဒီကွညျ့နှငျ့မောငျးပွီးဟိုတယျတဈခုကိုတှပွေီ့းဝငျရပျလိုကျတယျ။ ဟိုတယျကကောငျလေး တဈယောကျ ထှကျလာတယျ။ “ညီလေးဒီအမကိုအခနျးအရငျလိုကျ ပွလိုကျပါ။ငါReceptionသှား လိုကျမယျ” “ဟုတျကဲ့အကို” ကမြလညျးကောကျလေးနောကျကို လိုကျသှားလိုကျတယျ။ကောငျလေး ကအခနျးကိုပွတော့ “ရပွီမောငျလေး” ကောငျလေးကို ပွောပွီးအခနျးထဲဝငျ ကာအိမျသာခနျးထဲဝငျရတယျ။ အိမျသာတကျပွီးမှပေါ့ပါးသှားတယျ။အားလုံးသနျ့ရှငျးရေးလုပျပွီးအ ခနျးထဲ ဝငျလာတော့ကိုမိုးမွငျ့ကို တှရေ့ပွီး “ဟငျကိုမိုးမွငျ့ဒီအခနျးထဲရောကျနေ ပါလား” “ဟုတျတယျလေ ခငျမြားအိမျသာ တကျတာ အခနျးငှားလိုကျရတယျ”“ဟော့တျော” “ငှားပွီးမှတော့မထူးဘူးခနနဦေး မယျ” “အျော အမျ” ဘာပွောရမှနျးမသိတော့ပေ။
“ကိုမိုးမွငျ့အခနျးကတနလေုံ့းငှားရတာလား” “မဟုတျဘူးလေးနာရီပဲ” “အော” “လာဗြာ မသီ” “ဟငျဘာလုပျမလို့လဲ” “ဟိုတယျ ရောကျမှတော့ခနနားပွီးမှ သှားကွမယျ” “ကိုမိုးမွငျ့နားရငျနားလေ” “လာပါဗြာ” ကိုမိုးမွငျ့ကမြကိုအိပျရာပျေါဆှဲချေါ တော့တယျ “ကိုမိုးမွငျ့မဖွဈဘူးနှျော” “ဘာဖွဈလို့လဲ” “အာ ကိုမိုးမွငျ့နှျော” “လာပါမသီရာ” ကိုမိုးမွငျ့ကကမြကိုပှခြေီ့ပွီးကုတငျ ပျေါချေါသှား ကာပကျလကျလှဲခြ လိုကျတယျ။ကမြရငျထဲစိုးရိမျထိတျ လနျ့ခွငျးတဝကျရငျခုနျခွငျးတဝကျ နဲ့ပေါ့။ကမြတှေးလိုကျပွီဒီအခွအေ နရေောကျမှတော့ကမြအဘုခံရ တော့မညျကိုပေါ့ အိပျရာထဲကိုမိုးမွငျ့ကဘေးကအိပျ ပွီးကမြကိုဖကျထားတယျ။ပေါငျတ ခြောငျး တောငျတငျထားတယျ။ခကျ တာကသူ့ဟာကွီးကကမြပေါငျကို လာထောကျနတေယျ။ကွကျသီးတှေ ထပွီးအာတှခွေောကျလာ တယျ။ “အပြိုကွီး ကွောကျနတောလား” “အာကွောကျတာပေါ့တဈခုခုဖွဈ သှားရငျဘယျလိုလုပျမလဲ” “မဖွဈရပါဘူး” “ဖွဈရငျ တာဝနျယူရမှာ” “အငျးယူမယျ၊ဖွဈလဲမဖွဈစရေဘူး” ကမြဘာမှဆကျမပွောတာ့ပေ။ဒီ ကိစ်စမြိုးကိုကွုံဖူးခငျြတာတော့ရှိပေ မယျ့ ကိုယျဝနျရသှားတာမြိုးကိုမလိုခငျြ။လငျလဲမလိုခငျြပေ။ ကိုမိုးမွငျ့ကမြကိုနမျးသညျ။အစက တော့ပါးပွငျမှနဖူး၊အဲဒီအထိကမြ ငွိမျ ခံနိုငျသညျ။ထိုမှတဆငျ့လညျ ပငျးရောကျလာသောအခါကမြလုံးဝမခံနိုငျပေ။ယားလညျးယားသညျ။
ကမြစိတျကပါလာသညျ။ဤတ လောကမြစိတျတှဖေောကျပွားနသေညျကိုတော့ကမြဝနျခံပါရစေ။ တဖွေးဖွေးနှငျ့ကိုမိုးမွငျ့ကကြ မအဝတျကိုခြှတျရနျကွံစညျလာပွီး အကင်္ငြ်္ီနောကျကြောဇကျအားဆှဲခြ သညျ။နောကျတော့ဘရာခြိတျကိုပါ ဖွုတျတော့သညျ။အ ကင်္ငြ်္ီကိုမတငျ တော့ကမြရှကျသညျ။ကမြနို့ပိနျ သေးသေးပွားကပျကပျကိုဘရာစီယာနှငျ့ကွီးခငျြယောငျဆောငျထား သညျမ ဟုတျပါလား။သတိရပွီးအတငျးဆှဲအုပျဖုံးသျောလညျးမရတော့ ပေ။နို့ပိနျလေးပျေါလာသညျ။ ထိုနို့ပိနျလေးကိုပငျကိုမိုးမွငျ့ကတ ပွှတျပွှတျစို့သညျ။ ကမြနို့စို့မခံဖူးပေ။ယခုလိုနို့စို့ခံရ သညျ့အခါကွကျသီးမှေးညှငျးထရုံ မကပိပိလညျးစိုရှဲသှားတော့သညျ။ အတှငျးခံတို့စိုလောကျပွီကိုမိုးမွငျ့ကကမြဝတျထားသောထမီစကပျအ ကှဲကွောငျးထဲလကျထညျ့ပွီးကမြ အဖုတျကိုအတှငျးခံ ဘောငျးဘီအ ပျေါကနပွေီးလကျနှငျ့ပှတျလရော “အာကိုမိုးမွငျ့မလုပျနဲ့တော့” အတှငျးခံဘောငျးဘီအပွငျထိစိုလာ ၍ကမြကပွော လိုကျသညျ။
ကိုမိုးမွငျ့ကအတှငျးခံဘောငျးဘီကိုဆှဲခြှတျသညျ။ကြှတျသှားသော ဘောငျးဘီကိုကုတငျခွရေငျးကိုပဈ လိုကျသညျ။ “မသီ “ “ဟငျ” ကမြအသံတုနျပွီးထူးလိုကျသညျ။ “လုံခညျြညဈပတျသှားမှာစိုးလို့မို့ ခြှတျလိုကျမယျနှျော” ကမြဘာမှပွနျမပွောသေးခငျစကပျဇကျ ကိုဆှဲခပြွီးစကပျကိုခြှတျပွနျ သညျ။ကမြစကပျကိုဖိထားလြှငျပွဲ မညျစိုး၍ခါးကွှပေးလိုကျရသညျ။ ထို့နောကျကိုမိုးမွငျ့ကကမြ ပေါငျ ကွားဝငျလာပွီးဒူးထောကျထိုငျကာသူ့လီးကွီးကိုကိုငျပွီးကမြအဖုတျကို သခြောကွညျ့လရော “အာမကွညျ့နဲ့လကေိုမိုးမွငျ့” “မသီဟာလေးကတျောတျောသေး တာပဲ” မသီတကယျရှကျသညျ။နို့သေးယုံမ ကအဖုတျလေးပါသေးသညျ။တအုံ လုံးလကျသုံး လုံးခနျ့သာရှိသညျ။အလို့မခံဖူးသေးသဖွငျ့ပိပိအကှဲ ကွောငျးကပူးပွီးကပျနသေညျ။ “ကိုမိုးမွငျ့မလုပျခငျြနတေော့၊ ပေါကျကရ တှပွေောမနနေဲ့ကမြ ရှကျတယျ” “ဒါမြိုးမှကွိုကျတာ” ကိုမိုးမွငျ့ကသူ့လီးကိုကိုငျပွီးအကှဲ ကွောငျးတလြောကျခြျောထိုးထိုး လေ ရာအရညျတှထှေကျပွီးခြော ကာအစကေို့ထိလသေညျ။တခါမြှဤသို့မခံစားဖူးပေ။လူကကော့ပွီးအပျေါတကျလာသညျ။မသီရှကျ သှားရတယျ။သူကမသီနို့ကိုလြှာ ဖြားလေးနှငျ့ထိတှလေို့ကျ တော့မသီနို့သီးခေါငျးလေးကခြှနျ လာသလိုနို့တအုံလုံးကွကျသီးဖု တှထေသှားရပွနျတယျ။ကငျြတကျ တကျခံစားမှု့နှငျ့အတူအထိအတှေ့ ရဲ့ခံစားမှု့ရသတမြိုးကိုခံစားလိုကျရ ပွနျတယျ။အလိုလို ညညျးမိတယျ။
“ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ” “အာ့ အငျးးဟငျးးဟငျးးး” “အာကမြ မနတေတျဘူး၊တျောပွီ” ကိုမိုးမွငျ့ကကမြနို့သီးခေါငျးဖြား လေးကိုလြှာနှငျ့ ထိုးမှပွေီး ယကျလိုကျနို့အုံတဈခုလုံးကိုစို့လိုကျ နဲ့လုပျလိုကျတဲ့အခါမှာတော့မသီ တဈယောကျအျောညညျးသံမြား ထှကျ၍ပငျလာ သညျ။ကိုမိုးမွငျ့ရဲ့လကျကမသီရဲ့ပိပိအ ပျေါကနအေုပျကာပှတျပေးလေ တော့မသီတှနျ့ကနဲ့ဖွဈသှားပွီးပိပိတအုံလုံးစိုသှားသလို ခံစားလိုကျရ ပွီးရငျထဲသိမျ့သိမျ့တုနျသှားရသညျ။ အပျေါမှပှတျရုံမကအကှဲကွောငျးတ လြောကျတဖွေးဖွေးပှတျပေးရာပိပိ တအုံလုံးကွှတကျလာလသေလား ထငျမှတျရအောငျဖောငျးကွှလာခဲ့ သညျ။အကှဲကွောငျးအလြောကျစုံ ဆနျလှုပျရှားပွီးနောကျမှာ အကှဲ ကွောငျးအပျေါနားအစနေ့ာရာနား ကိုလကျခလယျဖွငျ့ဖွေးဖွေးခငျြး ပှတျလရော “အာ့!အငျး ဟငျးးဟငျးးး” မိမိလုပျဖူး သျောလညျး ယခုအထိအတှနှေ့ငျ့မတူပေ၊စိတျ တို့ခကျြခငျြးထကွှလာသညျ။မကျြလုံးစုံမှိတျအျောညညျးမိသညျ။
ထိုစဉျမှာပငျကိုမိုးမွငျ့သညျမသီနှုတျ ခမျးအားစုပျနမျးလရောမသီလညျး စိတျပါလာပွီးပွနျလညျစုပျနမျး လိုကျတော့သညျ။တ ဖွေးဖွေးနှငျ့ မသီကာမစိတျကိုတ ဖွေးဖွေးထကွှလာအောငျလုပျ ဆောငျပေးခွငျးကွောငျ့မသီ၏ ကာမစိတျတို့အထှဋျအထိပျသို့ ရောကျရှိလုနီးနီးဖွဈလာသညျ။ ထိုသို့ဖွဈနစေဉျမှာပငျကိုမိုးမွငျ့ ကရပျပဈလိုကျသညျ။ မသီမကျြလုံးဖှငျ့ကွညျ့လိုကျစဉျ ကိုမိုးမွငျ့ ကအဝတျတှကေိုခြှတျပဈလိုကျသညျကိုတှလေို့ကျသညျ။ မကျြလုံးကအလိုအလြောကျပငျ ကိုမိုးမွငျ့၏ ပေါငျကွားနရောကိုကွညျ့ စဉျမှာ ၍ထောငျမတျနသေောလီးကွီးအားတှလေို့ကျရသညျ။ အပွငျတှငျဤမြှကွီးမညျဟုထငျ မှတျမထားသောလီးသညျငါးမတျ လုံးမြှမကနိုငျပေ။အရှညျသညျ လညျးခွောကျလကျမစှနျးစှနျးရှိ လောကျသညျ။ ကိုမိုးမွငျ့က မသီလကျကိုကိုငျပွီးလီးပျေါတငျ ပေးရာမသီလညျးအယောငျယောငျ အမှားမှားပငျကိုငျထားမိသညျ။အထိအတှမှေ့ာတခွားသောနရောမြား နှငျ့မတူပေ။ပူနှေးနှေး ကလေးနှငျ့တမြိုးလေးဖွဈရသညျ။မသီလကျကိုဆုပျကိုငျပွီးလကျကိုလီးအရငျးထိ ဆှဲခလြိုကျရာနီရဲသောထိပျဖူး ကွီးကပျေါလာ ကာဒဈကကားကားကွီးဖွဈနသေညျ။ကွကျသီးထမိရသညျ။ဤမြှကွီးမညျဟုထငျမထား မိခဲ့ပေ။
“ဘယျလိုလဲမသီ” “အကွီးကွီးပဲနှျော” “ပုံမှနျလောကျပါပဲမသီရယျ”“ကမြကအရမျးကွီးနသေလားလို့” “မသီကအပွငျမှာမတှဖေူ့း ဘူးလား” “မတှဖေူ့းဘူး” “အဖုတျကိုနမျးပေးမယျ” “အာမလုပျနဲ့” “မသီကွိုကျသှားမှာပါ” “အာ” မသီရှကျသှားရပွနျသညျ။အမှနျ တော့အနမျးခံကွညျ့ခငျြခဲ့သညျ။ကိုမိုးမွငျ့ကပေါငျကွားကိုဝငျကာ မကျြနှာအပျတော့မသိစိတျ၏လှုံ့ ဆျောမှု့ကွောငျ့မသီပေါငျကိုဟ လိုကျမိသညျ။ ကိုမိုးမွငျ့ကမသီပေါငျကိုမတငျပွီးစိုရှဲနသေောမိမိပိပိအားလြှာနှငျ့ အပွားလိုကျယကျလိုကျသောအခါ “အားးး! “အားးးလူကတုနျယငျသှားသညျ၊ပူနှေးစို စှတျသောလြှာကအကှဲကွောငျးတ လြောကျထိထိမိမိယကျသှားခြေ သညျ။ထိုနောကျ လြှာဖြားကပူးကပျနသေောနှတျခမျးနှဈလှာအကှဲ ကွောငျးတလြောကျတိုးဝငျလာပွီး နှုတျခမျးသားမြားအားပှတျဆှဲသှား ပွနျသညျ။ “အားးးအီးးဟီးးဟီးးး” ခါးကလပေျေါကွှသှားသညျ။ပိပိတို့ မော့ဖောငျးလာသညျ။လကျကအိပျ ရာခငျးကိုသာတငျးတငျးဆုပျကိုငျ မိ တော့သညျ၊ “အာ့! အငျးးဟငျးးးဟငျးးးရှီးးရှီးး” တရှီးရှီးနဲ့အရမျးကောငျးနသေညျ။ အစကေို့လြှာနှငျ့ထိုးမှပွေီးတပွှတျ ပွှတျစုပျ ပွနျသညျ။
“ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ” “အာ့အိုးးရှီးးရှီးးးအိုးးအားး” “အား အားးရှီးးရှီးးးအားကမြ ကမြ ပွီးတော့မယျ အားရှီးးရှီးးး အားး” တကယျပါဒီ လိုပွီးသောအရာသာ မြိုးမတှဖေူ့းသေးသောမသီအဖို့ စိတျကကနြေပျမိတော့သညျ၊မသီ ကွိုကျသှားတာကိုတော့ဝနျခံပါ သညျ။ “ကိုမိုးမွငျ့ အဝှာလေ၊အဝှာလုပျရငျ အကာအကှယျနဲ့လုပျပေးပါနှျော” “ဟုတျကဲ့ပါ၊ကနြျောခနကကှနျဒှနျယူလာခဲ့တယျ” ကိုမိုးမွငျ့ ကကှနျဒှနျဆိုတာကွီးကိုပွ ပွီးကိုဖောကျကာ သူ့ရဲ့မာနတေဲ့လီးပျေါစှပျခလြိုကျ သညျ။ထိုနောကျနောကျထပျအထုပျတဈထုပျကို ဖောကျပွီးစှပျထားသော ကှနျဒုံးပျေါမှာသုပျလိမျးလိုကျသညျ “ကိုမိုးမွငျ့ဖွေးဖွေးလုပျနှျော” “အငျးပါမသီ” ကိုမိုးမွငျ့ကမသီပေါငျ ကွားဝငျ ပွီးပိပိအဝကိုဂထြေပျသုပျပွီးလီးတဲ့ကာတဖွေးဖွေးနှငျ့ဖိသှငျးလိုကျ သညျ “ဗဈြ ဗဈြ ဗဈြ” “အာ့ ဖွေးဖွေးနညျးနညျးနာ တယျ”တဝကျတောငျမဝငျသေးပေ၊ နာတယျပွောပွီးမသီကညှဈထား သညျ။ “စိတျလြှော့ထားမသီ” “ဘယျလိုလြှော့ထားရမှာလဲ” ကိုမိုးမွငျ့ကလညျးမသီကိုစို့ပွီးမသီပိပိထဲကိုဖိထညျ့လိုကျရာ လီးကတငျးကွပျကွပျဆို့ဆို့ကွီးဝငျ လာပွီးပိပိအတှငျးသားမြား ကနာ ကငျြနတောကွောငျ့ကိုမိုးမွငျ့ကိုပွောလိုကျမိသညျ။
ဗဈြ ဗဈြ ဗြိ” “အာ့! နာတယျကိုမိုးမွငျ့စူးပွီးအောငျ့နေ တာပဲ.ဖွေးဖွေးလုပျပါ” လီးကိုတဆုံးအထိသှငျးပွီးမသီရဲ့ နှုတျခမျးကိုနမျးစုပျ ရငျးတဖွေးဖွေးဖိခလြိုကျသညျ။။ကပျြကပျြ တညျးတညျးပိပိလေးကိုကိုမွငျ့လီးကထိုးခှဲပွီးဝငျလာတယျ။ “ဗဈြ..ဗဈြ..ဗွိ ဗဈြ” “အာ့!အီးး အားးး” မသီအသညျးအသနျအျောလိုကျရ သညျ။အဖုတျတခုလုံးမီးစနှငျ့ထိုး သလိုပငျခံစားလိုကျရသညျ။ သို့သျောကာမ စိတျမြားဖွဈပျေါနေ ခွငျးကွောငျ့လားမသိပေ။ခနတာမြှ သာနာပွီးကောငျးလာသညျ။မသီကကကိုမိုးမွငျ့အနမျးကို ဖကျ၍တုနျ့ပွနျ မိသညျ။ကိုမိုးမွငျ့နှုတျခမျးလှာကွားထဲလြှာထိုးထညျ့လိုကျသညျ။ကိုမိုးမွငျ့ကစုပျဆှဲယူ သညျ။ကိုမိုးမွငျ့လြှာကိုမသီကပွနျ စုပျ ဆှဲသညျ။မသီစိတျတို့မတရား ထနျလာသညျ။ကိုမိုးမွငျ့ကတဖတျ ဖတျနှငျ့လိုးမှကိုမိုးမွငျ့ကိုလှတျလိုကျသညျ၊ စိတျတို့ထနျပွီးအဖုတျ ထဲမှပိပိနံရံတို့လှုပျရှားကာညှဈသကဲ့သို့ဖွဈလာ သညျ။မသီစိတျထနျပွီးမိမိနို့ကိုပှတျ ကာညညျးတော့သညျ။လီးဝငျသံကတဇှိတဗွိ ဗွိမွညျလာသညျ။ပေါငျခငျြးထိကပျသံတဖနျးဖနျးကွားလာရသညျ။ ကိုမိုးမွငျ့ကမသီပေါငျကိုမတငျ ပွီးအပျေါစီးကစိုကျခလြိုး တော့ သညျ။လီးဝငျခကျြနကျသညျ။တခကျြတခကျြအောငျ့သညျ။ သိုသျောခံရကောငျးလှသညျ။ “ဗဈြ!ဘှတျ ဖှတျ ဖနျးးဖနျးး” “အာ့! အိုးးအာ့ရှီးးရှီးးးးရှီးးး” စိတျကမနနေိုငျ၍အစကေို့ပှတျလိုကျ သေးသညျ။အရမျးကိုကောငျးနေ သညျ။ကာမအရသာသညျ ထိုသို့ရှိ ခွငျးကွောငျ့တခြို့သောမိနျးမမြားအရိုကျခံပွီးလငျယောကျြားကို ပေါငျးနကွေမှနျးသိတော့သညျ။
မသီကွာကွာပငျအလိုးခံခငျြလာ သညျ။မိုးမွငျ့ပွီးသှားမှာပငျစိုးရိမျမိသညျ။ကိုမိုးမွငျ့ကိုကွညျ့လိုကျသညျ။ မိုးမွငျ့ကမကျြစိစုံ မှိတျ၍တခကျြ ခငျြးဆောငျ့လိုးသညျ။ပိပိနှုတျခမျးသားအတှငျးသို့လိပျဝငျသှားသလားမှတျရသညျ။ ဒဈကားကွီးကနှုတျခမျးသား အား ဆှဲယူသှားလိုကျ၊ပွနျထုတျလာလိုကျပုံစံဖွဈသညျ။အတှငျးသားတို့အီ ဆိမျ့နအေောငျကောငျးလှသညျ။ မသီအားမရပေ။ကိုမိုး မွငျ့ကိုဆှဲဖကျပွီးနှုတျခမျးအားပွနျစုပျလိုကျ သညျ။ဒူးထောကျ၍လိုးနသေောကို မိုးမွငျ့ညောငျးလာဟနျရှိသညျ။ “ပုံစံပွောငျး ရအောငျမသီ” “ဟုတျ ဘယျလိုလုပျမလဲ” “ကုနျးပေးပါလားမသီ” “ဟုတျ” ကုနျး၍ခံသညျကိုကွားဖူးသညျ။ အောငျ့သညျဟုလညျး ကွားဖူးသညျ၊ထိုအခြိနျတှငျအောငျ့ရငျလညျး အောငျ့စတေော့ဟုသဘောထား လိုကျသညျ၊ကိုမိုးမွငျ့ခိုငျးသောပုံစံ မြိုးကို မှနျး၍ကုနျးလိုကျသညျ။ ကိုမိုးမွငျ့ကမသီခါးကိုဖိ၍ခှကျ ခိုငျးသညျ၊ထိုသို့ခါးခှကျလြှငျပိပိနှုတျ ခမျးသားတို့နောကျပဈထှကျမညျကို သိသညျ၊လီးကပိပိနှုတျခမျးကွားတရဈရဈနဲ့တိုးဝငျလာသညျ။အဆုံးထိမရောကျခငျပငျနညျးနညျးအောငျ့ သညျ။သို့သျောမသီအောငျ့ အညျးသညျးခံလိုကျသညျ။အဆုံးထိဝငျသှားမှကိုမိုးမွငျ့ကပွနျဆှဲထုတျ ပွီးဖွေးဖွေးခငျြးသှငျးထုတျလုပျ သညျ။တ ဖွေးဖွေးနှငျ့အရသာတှလေ့ာသညျ။
“ဘှတျ ဖှတျ ဖှတျ…ဖတျ ဖတျ” “အာ့ အငျးးဟငျးးးဟငျး” ခါးကိုကိုငျဆှဲပွီးတခကျြခငျြးဆောငျ့ လာသညျ။တငျသားမြားကိုပှတျပေး ပွီးဆုပျကိုငျကာဆောငျ့လိုးလာသညျ။ပုံစံမတူသောအရသာကိုရရှိုပွနျ သညျ။လီးကပိုဝငျသလိုခံစားရသညျ တဖတျဖတျတဖှတျဖှတျ နှငျ့အသံ ထှကျသလိုမသီညညျးမိရပွနျသညျ။ “ဖှတျဘှတျ ဖနျး ဖနျးးဖနျးး” “အငျးးဟငျးးးဟငျးးးအာ့..ရှီးးအား” ဆောငျ့ခကျြတို့ပို မွနျလာပွီးနောကျ မသီမှာ တအာ့အာ့တရှီးးရှီး အျောပွီး ပွီးသှားရတော့သညျ။ မသီပွီးသှားပွီးမကွာမှီပငျကိုမိုးမွငျ့ နညျးနညျးပို ကွမျးလာပွီးလီးကိုဆှဲထုတျသှားသညျ။ထိုနောကျလီးမှအ စှပျအားဖွုတျကာအမှိုကျပုံးထဲသှား ထညျ့ပွီးရခြေိုးခနျးဝငျသှားသညျ။ ရခြေိုးခနျးမှထှကျလာပွီးကုတငျ ပျေါတကျလာကာ “မသီ နာသှားလား” “နာတာပေါ့၊အောငျ့နတောပဲ” ” နောကျရကျမှသကျသာ သှားမှာ” “အငျး” ကိုမိုးမွငျ့ကမသီကိုသူ့ဖကျလှညျ့ကာ နို့ကိုစို့ပွနျသညျ။ “ကိုမိုးမွငျ့မသီနို့တှလေဲနာနပွေီ” “ဟုတျလား” “မသီကြ နျောယကျပေးတာကောငျး လား” “အငျးကောငျးတယျ” “နောကျတဈခါလာရငျရှယျလုပျပေး မယျမသီ” “အငျး” မသီမငွငျးမိ တော့ပေ၊မသီကွိုကျ သှားသညျပဲလေ။
“မသီကနြေျာ့ကိုစုပျပေးပါလား” “နောကျအခေါကျမှစုပျပေးမယျ၊ ခုကဘဏျကိုသှားရအုံးမယျ၊နောကျ ကရြငျယောငျးမကကလေးနဲ့ ဈေး ရောငျးရတာအဆငျပွမှောမဟုတျဘူး” “စတိလေးသာစုပျပေး” “အငျးစုပျပေးမယျ” မသီအိပျရာကထပွီးကိုမိုးမွငျ့လီးကို စုပျ ပေးလိုကျသညျ။ကိုမိုးမွငျ့လီးက ပြော့နရောကနပွေနျမာလာသဖွငျ့ရပျလိုကျသညျ။တျောကွာနောကျတ ကွိမျထပျလုပျလြှငျမသီခံ နိုငျမညျမ ဟုတျပေ။ထို့ကွောငျ့ “ကိုမိုးမွငျ့သှားရအောငျနှျော” “ခနလေးစုပျပါဦး မသီ” “နောကျကမြှကိုမိုးမွငျ့ကနြေပျ အောငျစုပျ ပေးတော့မယျ” “ဟုတျကဲ့ပါဗြာ” မသီအိပျရာကထပွီးရခြေိုးခနျးထဲ ဝငျကာသနျ့ရှငျးရေးလုပျလိုကျပွီး အဝတျမြားပွနျဝတျသညျ။ ကိုမိုးမွငျ့ ကအဝတျပွီးပွီဖွဈ၍မသီကိုဘရာ ခြိတျတတျပေးပွီးအကငြ်္ီဇကျကိုဆှဲတငျပေးသညျ။ ထို့နောကျအခနျးအပွငျကိုထှကျခဲ့ ပွီး ကိုမိုးမွငျ့ကားပျေါသှားထိုငျနလေိုကျ သညျ။ကိုမိုးမွငျ့ကိုဟိုတယျဝနျထမျး ကမှတျပုံတငျလာပေးရာယူလိုကျပွီး ဘဏျရှိရာဆီသို့ မောငျးထှကျခဲ့လိုကျ သညျ။ဘဏျကစာအုပျရပွီးနောကျအိမျသို့ပွနျလာခဲ့သညျ။မသီကိုလမျး ထိပျတှငျခပြေးရနျပွောလိုကျတော့ ကို မိုးမွငျ့ကလမျးထိပျတှငျခပြေးပွီးအလုပျထဲသို့ပွနျသှားသညျ။မသီအိမျကိုရောကျပွီးဆိုငျထှကျသညျ။
မြားမကွာမှီကိုမိုးမွငျ့လညျးရောကျ လာသဖွငျ့ကှမျးယာယာပွီးကိုမိုးမွငျ့ ရုံးခနျးဆီသို့ထှကျခဲ့သညျ။ “ကိုမိုးမွငျ့ကှမျးယာလာပို့တာ” “ဟုတျကဲ့မသီ၊အဆငျပွလေား” “နာနတောပဲ” “ညကရြငျပါရာလေးသောကျလိုကျ” “ဟုတျကဲ့ကိုမိုးမွငျ့” မသီကှမျးယာပို့ပွီးခပျ တညျတညျနှငျ့ ပွနျထှကျခဲ့သညျ။ညနအေထိကှမျး ရောငျးပွီးညရောကျတော့ပါရာတဈ လုံးသောကျကာအိပျလိုကျသညျ။ မနကျကြ တော့တျောတျောသကျသာ သညျ။သကျသာသညျနှငျ့ကိုမိုးမွငျ့ကိုသတိရမိသညျ။ကိုမိုးမွငျ့လာမညျ့ လမျးကိုသာမြှျောနမေိသညျ။မသီ တှေးမိသညျငါအရူးကိုအမဲသား ကြှေးမိလသေလားတှေးမိတော့ သညျ။သို့သျောကိုမိုးမွငျ့ပျေါမလာ ပေ။ခရီးထှကျနသေညျ။တ ပတျ ကြျောခဲ့သညျ။ကိုမိုးမွငျ့ကိုသတိရ နသေညျ။သူ့တပညျ့တှကေိုမေး ကွညျ့တော့နှဈပတျကွာမညျဟုသိရ သညျ။တပတျ လောကျကွာတော့ ရာသီလာပွီးနှဈရကျအတှငျးမှာ ကိုမိုးမွငျ့နှငျ့အတူအိပျခဲ့သညျကိုည တိုငျးသတိရမိသညျ။ဝငျငှနေညျး နညျးရ လာတော့ယောငျးမကိုပွော ပွီးအမနှေငျ့ညီမကိုရနျကုနျအလညျ ချေါလိုကျတော့အမနှေငျ့ညီမရောကျ လာသညျ။အမနှေငျ့ညီမကို ဘုရားဖူးလိုကျပို့လိုကျသေးသညျ။အခုဆို လြှငျညီမဖွဈသူကပါဆိုငျမှာကူ၍ ဈေးရောငျးပေးရာနလေ့ညျခငျးဆို လြှငျအားနပေေ တော့သညျ။ကိုမိုးမွငျ့ကနှဈပတျကွာပွီးပွနျရောကျ ခြိနျတှငျကှမျးယာသှားပို့တော့ “မသီ မနကျဖွနျနလေ့ညျအားလား” “အားတယျ လေ၊အခုညီမလေးဆိုငျ ထိုငျပေးနတေယျ”
“ဟုတျလားအိုးမကှဲတော့အဆငျပွတောပေါ့၊အဲဒါဆိုမနကျဖွနျအ ပွငျသှားရအောငျ” “သှားလေ” “မသီအိမျကိုဘယျလိုပွောခဲ့မှာလဲ” “ဘဏျကိုငှသှေားသှငျးမယျလို့ပွော လိုကျမယျ၊ပွီးတော့ဆိုငျအတှကျ ပစ်စညျးနညျးနညျးဝယျမယျပွော လိုကျမယျ” “အခြိနျနညျး နညျးကွာမယျပွော ထားပေါ့” “အငျး “ “မနကျဖွနျကိုးနာရီအရငျနရောက စောငျ့မယျ” “အငျးစောငျ့၊လာခဲ့မယျ” ကိုမိုးမွငျ့ခြိနျးတာကို ကမြမငွငျးနိုငျ ကမြကိုယျတိုငျကတှခေ့ငျြနပွေီ။ နောကျနကေ့တြော့မနကျကိုးနာရီကို ကိုမိုးမွငျနဲ့ခြိနျးထားသောနရောမှာ စောငျ့နေ လိုကျတော့ကိုမိုးမွငျ့ ရောကျလာတယျ။ “မသီဈေးအရငျသှားလိုကျလေ” “ဘဏျကိုအရငျသှားလိုကျမလား လို့” “ဘဏျကသှားစရာ မလိုဘူး၊ငှေ ထညျ့မှာမဟုတျလား” “ဟုတျတယျလေ” “ဘယျလောကျထညျ့မှာလဲ” “နှဈသိနျး” “ကနြေျာ့ကိုပေး” “အမျ ဘာဖွဈလို့” “ကနြေျာ့ကဒျထဲကပွနျလှဲပေးမယျ” “အဲလိုရလား” “ရတယျ” “အဲဒါဆိုဈေးအရငျသှားမယျ” ဈေးအရငျသှားလိုကျပွီးဝယျစရာရှိတာ ဝယျပွီးကားပျေါတငျခဲ့လိုကျ သညျ။ပွီးတော့တနကေ့ဟိုတယျကို ပဲသှားလိုကျကွတယျ။ဟိုတယျ ရောကျတော့ “မသီ အကငြ်္ီတှေ ကိုခြှတျပေးမယျ” “အာရခြေိုးခနျးအရငျဝငျအုံးမယျ၊
ခြှေးနံ့တှနေဲ့ညဈပတျနမှော” “အငျးဝငျလိုကျလေ” မသီရခြေိုးခနျးဝငျပွီးအဝတျတှေ ခြှတျကာအောကျတပိုငျးလုံးကိုရနေဲ့လောငျးခြ လိုကျပွီးဆပျပွာနှငျ့သေ ခြာဆေးကွောလိုကျတယျ။ရစေငျ အောငျသုတျပွီးသဘကျပတျထှကျ ခဲ့တယျ။ကိုမိုးမွငျ့ကလညျးရခြေိုး ခနျးဝငျတယျ။ပွနျထှကျလာတော့ အဝတျတောငျမပါပေ။မသီကကု တငျပျေါမှာအိပျနလေိုကျသညျ။ကို မိုးမွငျ့လာတော့ဆီးဖကျထား လိုကျ သညျ။ကိုမိုးမွငျ့ကမသီကိုနမျးတယျ မသီလညျးလှမျးနသေညျမဟုတျ လား။နှုတျခမျးခငျြးနမျးစုပျကွသညျ။မသီအဖုတျက အလိုလိုနရေငျးစို လာသညျ။အထိအတှကေ့မသီရဲ့စိတျကိုပွောငျးလဲစသေညျ။မသီနို့တှကေိုမိုးမွငျ့ကစို့သညျ။အရငျလို မယားပဲ စိတျပိုကွှစသေညျ။အဖုတျကိုကိုငျပှတျသညျ၊အကှဲကွောငျးလကျနှငျ့ထိုး၍မှပေေးရာမသီမှာစိတျတှကွှေသထကျပိုကွှလာရသညျ။ ကို မိုးမွငျ့လီးကွီးကိုအသာအယာဆုပျ ကိုငျပေးလိုကျပွီးဆှပေးလိုကျသညျ။
လီးကွီးကမာနျဖီသလိုဖွဈပွီးကွီး၍ မာလာသညျ။ “မသီ” “ဟငျ” “စုပျပေးပါလား” “အငျး” အပိုမဆိုတော့ပေ။အိပျရာကထပွီး မိုး မွငျ့လီးကိုတပွှတျပွှတျစုပျပေး လိုကျသညျ။ဒဈကွီးကိုငုံ၍စုပျရ သညျကိုလညျးအားရသညျ။လြှာ ဖြားနှငျ့ထိုးမှပေေးလိုကျသညျ။ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ” “အားးရှီးးးရှီးးးကောငျးလိုကျတာမသီရယျ”တရှီးရှီးတအားအားညညျးနသေ ဖွငျ့မိုးမွငျ့ဝဋျလိုကျသညျဟုထငျ လိုကျသညျ။ပိုအားရပွီးစုပျပေး လိုကျသညျ။လဥကလေးကိုဆုပျကိုငျညှဈရသညျကိုလညျးအရသာ တှသေ့လိုခံစားရသညျ။ “မသီ ရကေောငျးလိုကျတာဗြာ၊အခုမသီကိုပွနျလုပျပေးမယျ၊မသီပကျ လကျအိပျလိုကျ” မသီသူပွောသလိုအိပျလိုကျသညျ။ မသီဖငျအောကျခေါငျးအုံးခုသညျ။ မသီဖငျကွီးကအပျေါမွောကျတကျ ကာအဖုတျကွီးကိုပငျမွငျရသညျ။ ကိုမိုးမွငျ့ကမှောကျလကျြပငျမသီ အ ဖုတျကိုယကျသညျ။အကှဲကွောငျး တလြှောကျလြှာနှငျ့ထိုးမှသေညျ။ “ပလပျ၊ပလပျ ပွှတျပွှတျ” “အာ့ရှီးးရှီးးးး” ဒီတဈခါညညျးရ သူကမသီပငျဖွဈ သညျ။အဖုတျအကှဲထဲလြှာကိုဝငျနိုငျ သမြှဝငျအောငျထိုးမှသှေားတော့ မသီထှနျ့ထှနျ့လူးရသညျ။အစကေို့ တပွှတျပွှတျစုပျပွနျသညျ၊အရညျ တှတေစိမျ့စိမျ့ထှကျမှနျးမသီသိသညျ။အမှနျအကနျကိုကွိုကျသှားရသညျ။မသီကကောငျးလှနျး၍ခါးကို မွှောကျမိသညျ။မိုးမွငျ့လြှာက မသီဖငျဝကိုသှားယကျမိသညျ။
ထိုအရသာသညျလညျးတမြိုးတော့ကောငျးသညျ။ “မသီကောငျးလား” “အငျးး” တအာ့အာ့ညညျးရငျးဖွရေသညျ။ “မသီကနြေျာ့အပျေါကတကျခှပေး” “အာ..အားနာစရာကွီး” “ရတယျတကျ” မသီကမိုးမွငျ့အပျေါကနခှေပွီး မိုးမွငျ့ပါးစပျနှငျ့ခြိနျပွီးကုတငျခေါငျးရငျးကဘောငျကိုကိုငျပွီးထိုငျခြ လိုကျတဲ့အခါကိုမိုးမွငျ့ကကမြအ ဖုတျကိုလြှာနှငျ့ထိုးမှပေေးတော့ တယျ။ “ပလပျ ပလပျ” “အိုး!အားးးရှီးးရှီးးး “ ကမြအရမျးကွိုကျသှားတောတယျ။ တခကျြတခကျြကမြကိုယျတိုငျဖငျ ကိုလိုကျရှပေ့ေးတယျ။အရညျတှေ လညျးတစိမျ့စိမျ့စီးထှကျလို့လာ တယျ။အောကျကိုငုံ့ကွညျ့ပွီးမိုး မွငျ့အသကျရှူရမခကျအောငျလညျး ကွှပေးရတယျ။တခကျြတ ခကျြအ နအေထားပကျြပွီးသူ့လြှာကကမြ ရဲ့ဖငျဝတညျ့တညျ့ကိုထိုးမှမေိပွနျ သညျ။ဒီအရသာကလညျးစိတျကို ပိုကွှစမှေနျးကမြပို သတိထားမိ တယျ။
“ပလပျ ပလပျ” “အာ့ရှီးးရှီးးးးးရှီးးး” မသီအရမျးကိုစှဲလနျးမိတဲ့အရာတခုဆိုတာဝနျခံမိတယျ။ “မသီ ကနြျောတို့လိုးရအောငျ” “ဟုတျ၊ ကမြဘယျလိုနပေေးရမလဲ”“အပျေါကတကျလေ” “ဟုတျကဲ့” ကမြကိုမိုးမွငျ့အောကျကိုလြှောခြ ပွီးအဖုတျနဲ့လီးကိုတကေ့ာထိုငျခြ လိုကျသညျ။ “ဗဈြ ဗြိ ဗြိဗွဈ” “အာ့ အားလားးလားး” လီးကအဖုတျထဲတအိအိဝငျသှား သညျ၊အဆုံးထိရောကျတော့ပွနျကွှ လိုကျ သညျ။မိုးမွငျ့ကကမြခါးကိုကိုငျပွီးပငျ့လိုကျအောကျခလြိုကျ လုပျပေးသဖွငျ့ကမြကသကျသကျသာသာဖွငျ့အပျေါအောကျကွှကာ လုပျပေးလိုကျတော့သညျ။ဒီနအေ့ရ သာကပို၍ထူးခွားသညျ။ လုပျနရေငျးမှသတိရလာသညျက ကမိုးမွငျ့ကလီးကိုအစှပျမစှပျထား သညျကိုသတိရမိသညျ။ “ဟာအစှပျလဲမပါဘူး” “လုပျစမျးပါမသီ၊ပွီးသှားရငျအပွငျ ကိုထုတျပဈမယျ” ကမြလညျးပွနျပွီးလုပျပေးရာ ငါးမိ နဈခနျ့ပဲကွာသညျ။လူကညောငျး လာသညျ၊ “ညောငျးနပွေီမရတော့ဘူး” “ညောငျးရငျဆငျးလိုကျကနြျောလိုး မယျ” မသီ ပကျလကျအိပျပေးလိုကျသညျ၊
မိုးမွငျ့ကမသီပေါငျကွားဝငျပွီးဒူး ထောကျကာလိုးသညျ။လိုးရငျးပငျ မသီရဲ့အစနေ့ရောကိုပှတျသညျ။ “ဖှတျ ဘှတျ ဖနျးးဖနျးးး” “အာ့ အိုးးးရှီးးးရှီးးးး” တကယျပငျကောငျးသညျ၊အစအေ့ ပှတျခံပွီးအလိုးခံရသဖွငျ့မသီပွီး ခငျြလာသညျ။မသီအသံတှသေိသိ သာသာထှကျပွီးညညျးသညျ။မိုးမွငျ့ ဆောငျ့ခကျြကလညျးပွငျးသညျ။ အရမျးကောငျးလှသဖွငျ့မသီအျော ညညျးရငျးပွီးသှားတော့သညျ။ မသီပွီးသှားတော့ကိုမိုးမွငျ့ပွီးသှား မှာစိုးရိမျလာသညျ။ “ကိုမိုးမွငျ့ပွီးခါနီးအပွငျမှာထုတျ နှျော” “ကနြျောပွီးတော့မယျ မသီ” ကိုမိုးမွငျ့ကကမြအဖုတျထဲကလီးကို ထုတျပွီးပကျလကျအိပျနသေောကြ မအပျေါခှတကျလာကာကမြပါးစပျ ထဲလီးထညျ့ တော့ကမြပါးစပျဟပေး လိုကျသညျ။မိုးမွငျ့ကကမြပါးစပျထဲ ဖွေးဖွေးလေးလိုးနသေညျ၊နှဈမိနဈ ခနျ့ကွာသောအခါမိုးမွငျ့လီးက သုတျတှပေနျးထှကျပွီးကမြပါးစပျထဲဝငျသှားတော့သညျ၊ကမြထှေး ထုတျရနျပွငျသျောလညျးမိုးမွငျ့ကဆကျလိုးနသေဖွငျ့ကမြမှာ ထှေးမထုတျနိုငျတော့ပဲမြိုခရြတော့သညျ။စေးပဈြပဈြသုတျမြားအာခေါငျကတဆငျ့လညျခြောငျးထဲဝငျသှား သညျ။ ကိုမိုးမွငျ့ကသူ့ လီးပြော့ခှသှေားမှသူ့လီးကိုထုတျသှားကာအိပျရာပျေါ လှဲခသြညျ။ထိုအခါမှကမြလညျး အိပျရာကထပွီးရခြေိုးခနျးဝငျကာ အာလုပျကငျြးရသညျ၊ထိုနောကျရေ သောကျကာအိပျရာထဲပွနျလှဲလိုကျ သညျ။
“မသီထှေးထုတျလိုကျတာလား” “မထှေးလို့မဖွဈဘူးစေးကပျနတော” “အရသာဆိုးသလားလို့ပါ” “အနံ့သိပျမရှိဘူး၊အရသာလညျး မရှိ ဘူးစေးကပျနလေို့” “မသီအာခွောကျနလေို့နမေယျ” “ဟုတျတယျကိုမိုးမွငျ့” “ခနနားကွမယျမသီ၊နညျးနညျးမော သှားတယျ” “အငျးလေ” ကိုမိုးမွငျ့အိပျရာပျေါကထပွီးရခေဲ သတ်ေတာထဲကအခြိုရညျဘူးမြားကို ဖောကျကာကမြကိုတဈဘူးပေးပွီး သူလညျးတဈ ဘူးသောကျသညျ။ ထို့နောကျတော့ “မသီကိုပိုကျဆံလှဲလိုကျမယျ၊မသီ ရဲ့အကောငျ့နံ့ပါတျပွော” မသီအကောငျ့နံပါတျပေးလိုကျတော့ သူကငှလှေဲပွီး “မသီဖုနျးထဲကွညျ့လိုကျငှရေောကျ သလားလို့” “ဘယျလိုကွညျ့ရမလဲ” မိုးမွငျ့ကပွရာမသီကွညျ့လိုကျတော့ ငှဝေငျနသေညျကိုတှလေို့ကျရသညျ။စကားခနပွောပွီး “မသီထပျလုပျအုံးမယျ” “အာကှနျဒှနျလဲမရှိပဲနဲ့” “ခနလေး ဟိုတယျကကောငျ လေးကိုမှာလိုကျ မယျ” ဘေးမှာရှိတဲ့တယျလီဖုနျးကိုကိုငျပွီး ဆကျသညျ။ခနအကွာတှငျတံခါး လာခေါကျရာမိုးမွငျ့ကလုံခညျြထ ဝတျပွီးသှားသညျ၊ခကျြခငျြးပွနျလာ တော့လကျထဲအထုတျနှဈထုတျပါ လာသညျ။
“မသီ ကနေျာ့ကိုမှုတျပေးဦးဗြာ” “အငျးမှုတျပေးမယျ” မသီကကိုမိုးမွငျ့ပေါငျကွားထဲကို ဝငျပွီးလီးကိုစုပျသညျ။ဂှေးဥကိုပါ စုပျပေး ရာမိုးမွငျ့ကပေါငျကား၍ မွှောကျပေးသညျ။မသီသိလိုကျ သညျ။ဂှေးဥနှငျ့ဖငျကွားကိုစယကျ ပေးလိုကျသညျ။စအိုဝကိုမူမယကျ မိ အောငျရှောငျသျောလညျးမိုးမွငျ့ကမသီခေါငျးကိုနှိမျ့ကာလုပျခိုငျးသဖွငျ့ မသီလုပျပေးလိုကျသညျ။မိုးမွငျ့လီးကအရမျးကိုမာတောငျ လာသညျ။ “မသီကိုမှုတျပေးဦးမယျ” “မသီကုနျးလိုကျ” မသီကုနျးပေးလိုကျသညျ။မကျြနှာကိုတဖကျလှညျ့စောငျးပွီးကုတငျ ပျေါတှငျ ကပျနစေကောခါးကိုခှကျ ပေးထားသညျ။ထိုအခါမှမသီအ ဖုတျအပွငျကိုပွူးထှကျပွီးမိုးမွငျ့ ယကျလြှငျအဆငျပွမေညျ။မိုးမွငျ့ကမ သီဖငျနောကျမှနေ၍အဖုတျကိုယကျရငျးဖငျကိုပါလြှာနှငျ့ထိုးသညျ။ အဖုတျကိုလြှကျဖငျထဲလကျညှိုးထိုး မှသေညျ။မသီဒီကိစ်စကိုသိ သညျ။ မိုးမွငျ့ဖငျလိုးခငျြ၍ခှငျဆငျနသေညျမှနျးကိုမသိခငျြယောငျဆောငျပေး လိုကျသညျ။မသီဒုတိယအကွိမျပွနျ ပွီးစိတျထလာ သညျ။အဖုတျယကျ ခံရငျးညညျးမိသညျ။
“မိုးမွငျ့ လုပျလို့ရရငျလုပျတော့ဟာ” “အငျး လုပျမယျလေ”“လာဒီနရောမှာဒီလိုအိပျပေး” မိုးမွငျ့ပွသကဲ့သိုမသီနပေေး လိုကျ တယျ။ကုတငျမှာအတညျ့မအိပျပဲကနျ့လနျ့အိပျရတာပါ။ပွီးမှမိုး မွငျ့ကခေါငျးအုံးတဈလုံးယူပွီး ခါးအောကျမှာခုတယျ။ခွနှေဈ ခြောငျး မိုးပျေါထောငျပွီးလကျတ ဖကျနှငျ့ရငျဘတျပျေါပိုကျအပျကာနောကျလကျနှငျ့လီးကိုကိုငျပွီးအ ဖုတျဝမှာတပွေီ့းဖိသှငျးတယျ။ဒီတဈ ခါပုံစံအသဈပါပဲ။လီးဝငျသှားတော့မှခွနှေဈခြောငျးရှတှေ့နျးပွီးလိုး တော့တယျ။ “ဗဈြ ဗဈြ ဘှတျဖတျ ဖှတျ” “အားးးအိုးး…” တငျး ကွပျကွပျခံစားမှု့ကမပြောကျ လီးဒဈတိုးဝငျလာပွီးပွနျထှကျတော့ အတှငျးသားတှကေိုဆှဲယူသှားသလိုပါပဲ။တထဈထဈနဲ့ ရသာ တှရေ့ ပွနျတယျ။မိုးမွငျ့ဒီကိစ်စမြိုးမှာ အတျောကြှမျးကငျြတဲ့အဆငျ့ရှိမှနျး မသီတှေးမိတယျ။ဘယျသူတှေ ကိုမြားလုပျဖူးသလဲတှေး နတေုနျး တဒုတျဒုတျနဲ့တိုးဝငျလာတဲ့လီး ကွောငျ့အတှေးကိုပငျမပွေီ့းကာမအလိုကပြါသှားရတယျ။ဒီတကွိမျလိုးခကျြကတျောတျော ကွာတယျ။
မတျတပျရပျလိုးရလို့လားမသိ၊မိုး မွငျညောငျးဟနျပငျမပွ၊မသီ မှာသာပွီးလုလုဖွဈလာပွီးညညျး မိတော့တယျ “”ဘှတျ ဖတျ ဖတျ..ဖနျး ဖနျးး” “အာ့!အငျးးဟငျးးဟငျးးးမိုးမွငျ့ငါပွီးတော့မယျ၊အတူတူပွီးရ အောငျဟာ” “အငျး ကနြျောနညျးနညျးကွမျးမယျ” “အငျးကွမျးလေ” မိုးမွငျ့ကမသီပေါငျကိုပွနျကားပွီးကြောအောကျကနလေကျ နှိုကျပွီးပုခုံးကိုဆှဲကာကွမျးကွမျး လေးလိုးတော့ တယျ။ဆောငျ့ခကျြ တှကွေမျးလာသညျနှငျ့အမြှမသီ လဲအျောညညျးသံတှပေိုထှကျ လာခဲ့တယျ။ငါးမိနဈခနျ့ဆကျတိုကျ လိုးလိုကျတဲ့ အခါမသီကမိုးမွငျ့ ကြောပွငျကိုလှမျးဖကျလိုကျ တယျ။တကယျကိုလညျးကာမအရ သာကိုကောငျးစှာခံစားရပွီးနောကျ “ဘှတျ ဖှတျ ဖနျးဖနျးးးးး”“အာ့ အိုးးအီးးးပှီးးပှီ အိုးးးးး” မသီတကယျကိုပွီးသှားတယျ။ မိုးမွငျ့လညျးအခကျြငါးဆယျခနျ့မ နားတမျးလိုးလိုကျ ပွီးနောကျ မသီ၏ဖငျဝကိုလီးတကေ့ာဖိသှငျးသညျ။ “အားးး နာတယျဟ၊မလုပျနဲ့” လီးကလကျတဆဈခနျ့ဖငျထဲဝငျလာသညျ။ မီးနဲ့ ထိုးသလိုခံစားရသဖွငျ့မသီက ရုနျးကနျလိုကျသညျ။ “မရဘူးလားမသီ” “မရဘူးမိုးမွငျ့ကှဲသှားလိမျ့မယျ” “အဲဒါဆိုလဲထပျစုပျပေးဦး ဗြာ” “အေးစုပျဆိုလဲစုပျပါ့မယျဖငျတော့ မလိုးပါနဲ့” “ဟုတျကဲ့ပါဗြာ” မသီ မိုးမွငျ့လီးကိုဂှငျးထုသလိုလုပျရငျးစုပျလိုကျသညျ။သိပျ ကွာခငျမှာမိုး မွငျ့ရဲ့သုတျပူနှေးနှေးလေးမြားမသီ ပါးစပျထဲတဖွောဖွောထဲစီးဝငျသှားတော့တယျ။မသီမှာမိုးမွငျ့ကွောငျ့ ကာမ အရသာကိုနဖူးတှဒေူ့းတှခေံ့စားမိရတော့တယျ။နောကျ တော့ရခြေိုးခနျးထဲရဝေငျခြိုးလိုကျ ကွပွီးအိမျပွနျခဲ့ကွသညျ။
ဒီလိုနဲ့နှဈပတျတကွိမျခနျ့မိုးမွငျ့နှငျ့ မသီခြိနျးပွီးပစ်စညျးဝယျရနျအ ကွောငျးပွ၍တမြိုး၊ဘဏျငှသှေငျး ရနျအကွောငျးပွ၍တဖုံကာမ အရ သာကိုခံစားနကွေသညျမှာသုံးလခနျ့ကွာခဲ့သညျ။ နောကျတော့မိုးမွငျ့အားသူ့အကိုမှ နယျကိုလုပျငနျးတဈခုကိုကွီးကွပျ ခိုငျးရာ မိုးမွငျ့နယျကိုထှကျသှားရသညျ။မိုးမွငျ့မရှိတော့မသီလညျး ပငျြးလှသညျ။အမနှေငျ့ညီမရှာပွနျ ခငျြလာတော့မသီကသကွနျနာနီး မှ ပွနျပို့မညျပွောသညျ၊မိုးမွငျ့က နှဈဈလခနျ့ကွာမှပွနျပျေါလာပွီးပွနျ ထှကျသှားပွနျသညျ။သကွနျနီးတော့ မသီအမနှေငျ့ညီမကိုရှာပွနျ ပို့ပွီးရှာ တှငျစပါးရောငျးခွငျးနှားမြားဝယျ ယူခွငျး၊စသညျ့အလုပျကိုလုပျရငျး ကွာနရောမှထိုအလုပျမြားကိုကူညီပေးသောသူနှငျ့တ ပူးပူးနရေငျးက အစရှိခဲ့ပွီးပွီမို့ကာမစိတျကိုမထိနျး နိုငျတော့ပဲလုပျမိရာလူမိသှားသော ကွောငျ့အိမျထောငျမပွုခငျြပဲအိမျ ထောငျပွု လိုကျရတော့သညျ။
ကျမ မသီသီမြင့် အသက်သုံးဆယ့် ငါးရှိပြီ။ကျမရန်ကုန်ကိုရောက်လာ တယ်။ဇာတိကတော့အညာက၊အညာသူဆိုပြီးမဲမဲသဲသဲ မဟုတ်ဘူး။ အသားတော့ဖြူယုံမကဝင်းတယ်။ လှလားလို့မေးရင်တော့ရွာမှာတော့ ကွမ်းတောင်ကိုင်စာရင်းမဝင်ပေမယ့်ရွက် ကြမ်းရေကြိုအဆင့်ပေါ့။အ သားဖွေးယုံလေးထိန်းထားနိုင်တယ်။ပြောစရာအပြစ်ကတော့နို့သေး တာတစ်ခုပဲ။ဒီအသက်အရွယ် အထိ အပျိုကြီးဘဝနှင့်နေခဲ့တာ။ဘာစိတ် မှတော့မရှိခဲ့ဘူး၊ခုဒီအရွယ်ရောက်မှ ကျမစိတ်ကတမျိုးကိုဖြစ်လာတယ်။ဖြစ်ပုံကဒီ လို။မောင်လေးကရန် ကုန်မှာအိမ်ထောင်ကျတယ်။သူတို့ကတိုက်ခန်းငှားနေကြတာ။သူ တို့မှာသမီးလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ကျမ တူမလေးပေါ့၊ကျမတို့ရဲ့အသဲ လေးလေ။တနှစ်နီးနီးရှိပြီ၊အဲဒီက နေပြီးတော့ကျမကိုရန်ကုန်ကိုခေါ် တယ်။ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်သူ နိုင်ငံ ခြားသွားရမယ့်ရက်နီးလာလို့တဲ့။
သူ့သမီးနှင့်သူ့မိန်းမကိုထားခဲ့ရမှာ စိတ်မချလို့ဆိုတော့ကျမလိုက်သွား ရတယ်။ရွာမှာအမေနဲ့ညီမကိုထား ခဲ့ရတယ်။အဲဒီမှာကျ မကသူတို့နေတဲ့မြို့ကိုလိုက်လာရတဲ့အခါသူတို့ တိုက်ခန်းကHallခန်း၊ငှားနေတာ လဲဖြစ်လေတော့ အခန်းတွေကန့်မထားဘူး လိုက်ကာခန်းဆီးလေးပဲကာထား တယ်။ကျမလည်းခန်းဆီးရှေ့အိမ် ရှေ့မှာပဲအိပ်ရတယ်။ကျမမောင်က နိုင်ငံခြားထွက်ခါနီးတော့ အမရှိနေ တာတောင်မရှောင်ဘူးရှင့်။ညဆိုသူ တို့လိုးသံတဖတ်ဖတ်နှင့်ကျမယောက်မကလည်းတအားညည်းတယ်။ အမှန်ဆိုရွာ မှာမကြားဖူးတဲ့အရာ တွေ၊အစကတော့ရှက်တာပေါ့၊ အသံကြားတိုင်းရင်တုန်ပန်းတုန် အမြဲဖြစ်ရသည်။။
သူတို့လုပ်ရင်ကြားရတဲ့အသံတွေက ဒါမျိုးမကြားဖူးတဲ့ကျမအတွက် တော့တမျိုးကြီးပဲရှင့်။တပြွတ်ပြွတ် စုပ်သံတွေလည်းကြားရ တယ်။ အမှန်ဆိုရင်ကျမရှိတော့မောင်လေး ရှောင်ရမှာ၊ဒါပေမယ့်သူနိုင်ငံခြား သွားရတော့မယ်ဆိုတော့ရိက္ခာယူ သည့်သဘော လားမသိပေ။။ကျမအိပ်နေပြီဆိုပြီး လိုးကြသည်။တပြွတ်ပြွတ်နှင့်စုပ်သံ ကြားရသည်။ကျမကချက်ချင်းအိပ် ပျော်တတ်တဲ့လူမျိုး မဟုတ်တော့ သူတို့ကမသိပဲလုပ်ကြတာ ကျမစိတ်ထဲတစ်ခါမှမဖြစ်ဖူးတဲ့ခံ စားမှု့တွေဖြစ်နေမိတယ်။အသံတွေ ကြားပြီးကျမ အဖုတ်ဆိုလည်းစိုရွှဲ နေသည်မှာအမြဲတစေလိုဖြစ်နေ သည်။တဖြေးဖြေးနဲ့ကျမစိတ်တွေ ဖောက်ပြန်နေမိတယ်။တကယ်ကိုမယိုးမ ယွစိတ်တွေဖြစ်နေတယ်၊အဲဒီ စိတ်သာဖြစ်တာလင်ကျတော့မယူ ချင်ဘူး၊လင်ယူသားမွေးဒုက္ခတွေကိုမခံနိုင်ပါ။စိတ်ပါလာတိုင်း ကိုယ့်ဟာကိုပွတ်မိလာသည်။သို့သော်အား မရပေ။မောင်လေးမရှိတော့ယောင်းမနှင့်အတူအိပ်နေရသည်။လွတ်လပ်မှု့လည်းမရှိ ပေ။ယောင်းမသိ၍အရိုအသေတန်မည်ကိုလည်းစိုးရိမ်ရ သည်မဟုတ်ပါလား။ ကျမလဲယောင်းမဆီရောက်နေသည်မှာတလပြည့် တော့မည်၊အလုပ်က မယ်မယ်ရရမရှိ၊ကလေးထိန်းထ မင်းချက်ရုံသာဖြစ်တော့ကျမလည်းအလုပ်မရှိလျှင်မနေတတ်လေရာ၊ အလုပ်တစ်ခုလုပ်ရန်ကြိုးစားရ တော့သည်။
“ယောင်းမရေ နင့်ယောက်ျားလုပ်စာ ကနင်တို့မိသားစုအတွက်ပေါ့၊ငါလဲ အမေတို့ကိုထောက်ပံ့ဖို့တစ်ခုခုလုပ် ရမယ်” “ယောင်းမ ရယ်၊ဒီမှာကဘယ်အလုပ် ရှိလို့လဲ” “ဒီလိုပဲအရင်ကရွာမှာငါကွမ်းယာ ရောင်းခဲ့တာပဲ၊အဲဒီဟာပြန်လုပ်မယ်” “ယောင်းမဟိုရှေ့က တိုက်တွေပြန် ပြင်မှာတဲ့လူတွေရောက်လာကြ တယ်” “အေးငါလဲမြင်တယ်။အလုပ်သမား တွေလဲရောက်လာကြတယ်” “အင်း တွေ့တယ်မိသားစုသုံးလေး ဦးပဲ” “အဲဒီလူလောက်နဲ့တော့မဟုတ် လောက်ဘူး၊အများကြီးလာကြမှာ” “အင်းဟုတ်လောက်တယ်” “အဲဒါယောင်းမချက်ချင်းဆိုင်ဖွင့် လိုက်ရင်အဆင်ပြေမှာပဲ” “အေးမဆိုးဘူး၊မနက်ဖြန်ပဲဖွင့်မယ်” မသီချက်ချင်းဆိုင်ဖွင့် ရန်နေရာကို ရှင်းလင်းလိုက်သည်။ဆိုင်ဆောက် ရန်အလုပ်သမားများကိုအထူးရှာ ရန်မလိုပဲအသစ်ရောက်နေသော အလုပ်သမား မိန်းမကိုသွားပြောရာ လက်သမားများကချက်ချင်းလိုက် လာကြပြီးဆိုင်ခုံလုပ်ပေးသည်။ အလုပ်သမားမိန်းမများကစပ်စုကြ သည်။မိမိအပျိုကြီးမှန်းသိပြီး “အပျိုကြီးကခွင်ရှာတာတော်လိုက် တာ” “ဟင်ဘာလို့လဲ” “ကျမတို့အလုပ်သမားကခြောက် ဆယ်လောက်ရှိတယ်။ဆရာအပါအ ဝင်ကွမ်းစားကြတာလေ၊ဆိုင်ကနီး တော့ဒီဆိုင်ပဲအားပေးကြမှာ” “ဟုတ်လား” မသီ အားတက်သွားသည်။
“ဆရာကအဝေးကြီးကွမ်းဝယ်ထွက် တာမကြိုက်ဘူး၊သူကထွက်ဝယ်ခိုင်း မှသွားရဲကြတာ” “လာပို့ပေးရင်ကောင်းမယ်” “ငါးရာဖိုး အထက်ပို့ပေးမယ်ဟေ့” “အဆင်ပြေတာပေါ့” “ဆရာဆီပို့ရင်သတိထားပေါ့” “ဘာလို့ သူကလူပျိုလေ၊ဟီး ဆဲတာနဲ့ကြုံမှာစိုးလို့” “သူကဆဲသလား” “ဆဲတာပေါ့” “နင်တို့တွေပြန်မပြောဘူးလား” “ဘယ်ပြောရမလဲ၊သူဆဲတာကလဲ ရယ်ရတယ်” “ဟမ် ဆဲတာ ကရီရတယ်ဟုတ်လား” “မနာအောင်ဆဲတာ” “ဘယ်လိုဆဲတာလဲ” “ညစ်တီးညစ်ပတ်တွေ” “အယ်” ဆိုင်ဖွင့်ပြီးနှစ်ရက်ခန့်အထိ သူတို့ဆရာနှင့်မတွေ့ရပေ။သို့သော်အခန်း တခန်းရှင်းလင်းနေသည်ကိုတွေ့ရ သည်။ထိုကြောင့်စပ်စုကြည့်ရပြန် သည်။ “နင်တို့ ဟိုအခန်းဘာလို့ရှင်းတာလဲ” “မန်နေဂျာဆရာရဲ့ရုံးခန်းလေ” “သူဌေးကမလာဘူးလား” “ဆရာလားသူကအလုပ်ပိုများ တယ်”မန်နေဂျာဆိုတာလဲဆရာ့ညီလေ”တဖြေးဖြေးနှင့်အလုပ်သမားမိန်းမ များနှင့်ရင်းနီးလာသည်၊ထိုအလုပ် သမားမိန်းကလေး ထဲတွင်သွက် သွက်လက်လက်နဲ့တစ်ယောက်ပါ သည်။စကားပြောလျှင်ညစ်တီးညစ် ပတ်ပြောသည်။
“ဟေ့ကောင်မ အခုမှဈေးသွားတာ လား” “ဟုတ်ပါ့အပျိုကြီး မနေ့ညကငါ ယောက်ျားကြောင့်မအိပ်ရဘူး” “ဟင် နင့်ယောက်ျားမူး နေလို့လား” “ဟုတ်တယ် မူးပြီးမပြီးတော့ဘူး” “ရစ်နေလို့လား” “ရစ်တာမဟုတ်ဘူးအပျိုကြီးရေ၊ ဘုတာ၊ဘုတာ” “အမ် ဘာ လဲဘုတာ” “အဝှာလုပ်တာ” “အယ် ဒီကောင်မတော့” “ဟုတ်တယ်၊မနေ့ညကတော့တပြား သောက်လို့ပုံမှန်ပဲ၊တလုံးသာ သောက်ရင် မှောက်ရော” “အယ်” “ကျမယောက်ျားကတပြားတန်လေ””ပေါက်ပေါက်ရှာရှာပြောတော့မယ် နင်ဈေးနောက်ကျ နေပြီသွားတော့” အဲဒီကောင်မကိုမနည်းနှင်ထုတ် လိုက်ရသည်။မဟုတ်ရင်ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ်ပြောတော့မည်။မောင်လေးမရှိတာ့အသံ တွေမကြားရတော့ပေမယ့်ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေပြန်ကြားရတော့ စိတ်ကပြန်ကြွလာသည်။ ဆိုင်ပြန်ရောင်းနေတုန်းကားတစ်စီး ဝင် လာပြီးလူတစ်ယောက်ဆင်းလာ ကာရုံးခန်းဆီသို့သွားသည်ကိုတွေ့ လိုက်ရသည်။အလုပ်သမားခေါင်း ဆောင်များလည်းနောက်က လိုက်သွားကြရာမန်နေဂျာဆိုသူရောက်လာမှန်းသိလိုက်သည်။
ခနနေပြီးအလုပ်ထဲကိုသွားကြသည်။အလုပ်သမားများလည်းလိုက်ကြ ပြီးနာရီဝက်ခန့်ကြာသော်ပြန်ဆင်း လာသည်။ခပ်ဝေးဝေး ဖြစ်နေ၍သေ ချာကြည့်၍မရပေ၊စပ်စုချင်လာ သည်။ထိုအချိန်တွင်အလုပ်သမား တစ်ယောက်၏မိန်းမကကွမ်းတစ် ထောင်ဖိုး လာမှာရာယာထားလိုက် မည်ဟုပြောလိုက်သော်လည်းရုံး ခန်းကိုလာပို့ရန်ပြောသွားသဖြင့်ရုံး ခန်းဆီသို့သွားပို့ရသည်။စပ်စုချင် သည်နှင့်အတော်ပင်ဖြစ်သည်။ ကျမကွမ်းသွားပို့သောအချိန်မှာထိုလူဖုန်းဆက်နေသည်။ထို့ကြောင့်မသီအထဲဝင်မသွားသေးပဲ အခန်းဝကနေစောင့်နားထောင်နေလိုက်သည်။ထိုဆရာဆိုသူကဖုန်းဆက်သူအား ဆဲနေသည်။ “အေး ဟုတ်တယ်လီးပဲ၊အဲလောက် ငတ်ပြတ်နေရင်မင်းတို့မိန်းမဟာ တွေလှီးပြီးယူလာခဲ့ပါလား” မသီကျောချမ်းသွားရသည်။ “ငါလိုးတွေသောက်လုပ်ကျလက် ကျောမတင်းဘူး၊ဟိုဟာမျိုးကျခြေ ဖျားပါထောက်တယ်” ဘာတွေတော့မသိပေ၊ပြောနေတာ ကတော့တော်တော်ဒေါသထွက်ပြီး ဆဲနေပုံပါပဲ ဖုန်းဆက်ပြီးတော့စာရင်းစာအုပ်ကို ကောက်ကိုင်ပြီးကြည့်နေချိန်မသီရုံး ခန်းအထဲသို့ဝင်လိုက်သည်။
“ဘာကိစ္စရှိလို့လဲဗျ” “ဟိုလေကွမ်းယာလာပို့တာ” “အော ၊ဟုတ်ကဲ့ထားခဲ့လေအမ” မသီကွမ်းယာကိုထားပြီးသုတ်သုတ်နဲ့ပြန် ထွက်ခဲ့ရသည်။ထိုသူကအ သားမဖြူသော်လည်းညိုသည့် ဘက်မရောက်၊နေလောင်သလိုဖြစ်နေသည့်မျက်နှာနဲ့ရုပ်ကမချောသော် လည်းယောက်ျားပီပီသသနှင့်ဖြစ် သည်။နှုတ်ခမ်းမွှေးများရိတ်ထား ပေမယ့်အနည်းငယ်စိမ်းနေသည်ဟု ထင်သည်။တစ်ခါတစ်ခါ လည်း သူ့အကိုဖြစ်သူသူဌေးလာတတ် သည်။သူဌေးလာလျှင်လဲနာရီဝက် ခန့်သာနေတတ်သည်ကိုမသီသတိထားမိသည်။သူ့အကို ရောက်သည့်အချိန်တော့မသီကိုကွမ်းလာမပို့ခိုင်း တတ်ပေ။ ဒီလိုနဲ့ကွမ်းယာပို့ရင်းရင်းနီးလာ သည်။သူ့နာမည်ကကိုမိုးမြင့်။မသီ ထက်ငယ်သည်။မသီစကားပြောရဲလာသည်။တနေ့တော့မသီစပ်စုကြည့်သည်။ “ကိုမိုးမြင့်တို့ကပြောတော့လဲပညာ တတ်ပြော တာကလဲကြမ်း လိုက်တာ” “ဟုတ်တယ်ဗျ။ကျနော်အုပ်ချုပ်နေတဲ့သူတွေကပညာတတ်တွေမှမ ဟုတ်တာ။ကြမ်းကြမ်းလေးပြော မှအဆင်ပြေတယ်၊တော် တန်ရုံပြောရင်ပန်းနဲ့ပေါက်သ လောက်ပဲထင်နေကြတာ” “မသီတော့ကျတော့နားထောင်ရ တာတမျိုး ကြီးဖြစ်နေတာပေါ့” “ခင်များကမိန်းကလေးလေ၊ပြီး တော့အပျိုကြီး၊ကျနော်တို့အလုပ် မှာကယောက်ျားလေးတွေလေ၊ဒီလို ပြော မှမသာတွေကရတာ၊ယောက်ကျားလေးရှိတဲ့နေရာကဒီလိုပါပဲ၊ဟိုကိစ္စတော့နည်းနည်းပါတာပေါ့”
“အမလေးဒီလိုကြီးလား” “ဟုတ်တယ်” ကျမလည်းအားနေရင်သူ့ဆီကွမ်း ယာသွားပို့တယ်။သူကပိုက်ဆံပေး ပါတယ်။ကျမက အလကားကျွေး လည်းမစားပါ။ထို့ကြောင့်ပင် “ကိုမိုးမြင့်ကျမဆေးခပ်ထားမှာ ကြောက်လို့လား” “ကျနော်ကဆေးမတိုးဘူး၊ခင် များ ဆေးခပ်လဲခင်များပဲခံရမှာ” “အမလေးမခပ်ရဲပါဘူးရှင်” တကယ်တော့သူ့အလုပ်သမားများ လာရောက်ကွမ်းဝယ်ကြ၍သာ ဆိုင်ကရောင်းရသည်။ထို့ကြောင့် သူတို့ကိုကျေးဇူးတင်၍အလကား ကျွေးခြင်းဖြစ်သည်။ ကွမ်းယာဆိုင်ဖွင့်ထားတာဆိုတော့ လဲ ယောက်ျားလေးတွေလာကြတာ ပေါ့။အပျိုကြီးဆိုတော့လဲရိသဲ့သဲ့ တော့အလုပ်ခံရတယ်။လွန်လာတဲ့အခါကျမလဲအော်ပစ်တယ်။ အဲဒီလိုလူတွေမရောင်းရလဲနေပါစေ ပေါ့။တဖြေးဖြေးနဲ့ကျမကွမ်းယာ ဆိုင်လေးရောင်းကောင်းလာတယ်။ ပိုက်ဆံလေးစုမိလာ တာပေါ့ တနေ့ကိုမိုးမြင့်ဆီကိုကွမ်းယာသွား ပို့ရင်း “အပျိုကြီးဟိုနေ့ကရန်ဖြစ်နေတာ ကြားလိုက်တယ်” “ဒီလိုပဲလေ” “ဟိုကမူး ရူးပြီးတစ်ခုခုလုပ်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ”
“လုပ်လို့ရမလား၊ပြန်ချမှာပေါ့” ကျမလည်းအညာသူပီပီပြန်ပြော လိုက်တယ်။ “ခင်များဘော်ဒီနှင့်ဗျာပြန်လုပ်လို့ ဘယ်လွယ်မ လဲ” “အမယ်လူကပိန်ပေမယ့်အားရှိ တယ်” “လက်တဖက်နှင့်ဆွဲရမ်းလိုက်ရင် တောင်လွင့်ထွက်သွားမယ့်ပုံကများ” “လူများ အထင်သေးလို့၊ရှင်တို့လို ဘီယာဖောဖောနေသူမှတ်နေလား” “ဟောဗျာဘီယာဖောလားဘာလား သိရအောင်ခင်များကိုလက် တဖက် နှင့်တွန်းလှဲလို့ရတယ်” “အံမယ်ရမယ်ထင်လို့လား” ကိုမိုးမြင့်ထလာပြီးကျမလက်ကိုတ ချက်ကိုင်လိုက်ကာ “ရုန်းကြည့် လိုက်လေ” မည်သို့မျှရုန်းမရပေ။ရုန်းရင်းပင် သူ့ရင်ခွင်ထဲရောက်သွားသည်။ သူ့ရင်ခွင်ထဲရောက်ပြီးကျမဖင်ကို သူ့ဟာကြီးနဲ့ ထောက်မိပြန်သည်။“အာလွှတ်တော့ကိုမိုးမြင့်၊လူတွေ မြင်မယ်” “ဘာမှမစိုးရိမ်နဲ့ကျနော့်ရုံးခန်းကလူမမြင်ရပါဘူးဗျာ” လူမြင်မှာ ပဲစိုးရိမ်မိသည်။ကျမစိတ် တွေတမျိုးကြီးဖြစ်သွားရသည်။ကို မိုးမြင့်ကျမအပေါ်မရိုးသားမှန်းသိ သွားရသည်။သို့သော်ကျမစိတ်မ ဆိုးမိပေ။နောက်နေ့တွေလဲကွမ်းယာ သွားပို့မြဲပါ။တနေ့ကိုမိုးမြင့်အလုပ် သမားတွေကိုပိုက်ဆံရှင်းသည်ကို တွေ့သည်။ATMကဒ် ကိုမြင်လိုက် ပြီးကျမလည်းပိုက်ဆံကိုစုကာATM ကဒ်ထဲထည့်ထားလျှင်ကောင်းမည် ဟုတွေးလိုက်သည်။
“ကိုမိုးမြင့်ATM ကဒ်လုပ်ရတာလွယ်လား” “လွယ်ပါတယ်၊တချို့ဘဏ်ကစောင့် ရတယ်၊တချို့ဘဏ်ကတစ်ခါတည်း လုပ်ပေး တယ်” “ကျမလဲATMကဒ်လုပ်ချင်တာ” “မြို့ထဲမှာလုပ်ရမှာပဲ၊ဒီမှာစက်တွေ ပဲရှိပြီး၊ဘဏ်မှမရှိတာ” “ကျမဘဏ်ကိုသွားရမှာ လား” “ဟုတ်တယ်၊လူကိုယ်တိုင်သွားရ မယ်”“ငွေစုရင်ကော” “ငွေကလွှဲပေးလို့ရတယ်လေ” “ဟုတ်လားကျမလဲATMကဒ်လုပ် ချင်တယ်” “မြို့ထဲသွားလုပ်လေ” “ကျမမြို့ထဲမသွားတတ်ဘူး” “အဲဒါဆိုရင်ကျနော်မနက်ဖြန်ဘဏ်သွားမှာ၊လိုက်ခဲ့လေ” “မနက်ဖြန် ကိုမိုးမြင့်သွားမယ့်အချိန် ပြော၊ကျမလိုက်မယ်” “လိုက်ခဲ့လေ” “ကျမဒီကတော့မလိုက်ရဲဘူး၊လမ်း ထိပ်ကစောင့်မယ်” “ပြီးရော” ညကျတော့ယောင်းမကို “ယောင်းမ ငါငွေစုစာအုပ်လုပ်မလို့ မြို့ထဲခနသွားမယ်၊ဆိုင်ခနစောင့် ပေး” “ဘဏ်တွေကကြာတယ် နှော်”“အေးယောင်းမပြီးတာနှင့်ပြန်လာခဲ့မယ်” “အင်းယောင်းမ” မနက်ကျတော့ရှစ်နာရီလောက်ကျမလမ်းထိပ်ကိုထွက်တယ်၊ကို မိုးမြင့်ဆီဖုန်းဆက်တော့ကိုမိုးမြင့်ကသူ လာနေပြီပြောတယ်။နာရီဝက် လောက်နောက်ကျပြီးမှရောက်လာ တယ်။ကျမဗိုက်ထဲ မနက်ကစားထားတာကရစ်နေပြီ။ကားပေါ်ရောက် ပြီးလမ်းတဝက်လောက်မှဝမ်းက သွားချင်လာတယ်
“ကိုမိုးမြင့်ဒီနားလက်ဖက်ရည်ဆိုင် လေးဘာလေးရှိလား” “ဒီနားမှာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မရှိဘူး လေ၊ဘာလုပ်မလို့လဲ” “ကျမဗိုက်နာ လာလို့”“ဟောဗျာ” ကျနော်တနေရာရပ်ပေးမယ်။ “အာလမ်းမကြီးမှာ” “ကြံကြံဖန်ဖန် ခင်များကလည်း လမ်းမကြီးပေါ်ရပ်မလား” ကိုမိုးမြင့်ကကားမောင်းရင်းဟို ကြည့်ဒီကြည့်နှင့်မောင်းပြီးဟိုတယ်တစ်ခုကိုတွေ့ပြီးဝင်ရပ်လိုက်တယ်။ ဟိုတယ်ကကောင်လေး တစ်ယောက် ထွက်လာတယ်။ “ညီလေးဒီအမကိုအခန်းအရင်လိုက် ပြလိုက်ပါ။ငါReceptionသွား လိုက်မယ်” “ဟုတ်ကဲ့အကို” ကျမလည်းကောက်လေးနောက်ကို လိုက်သွားလိုက်တယ်။ကောင်လေး ကအခန်းကိုပြတော့ “ရပြီမောင်လေး” ကောင်လေးကို ပြောပြီးအခန်းထဲဝင် ကာအိမ်သာခန်းထဲဝင်ရတယ်။ အိမ်သာတက်ပြီးမှပေါ့ပါးသွားတယ်။အားလုံးသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးအ ခန်းထဲ ဝင်လာတော့ကိုမိုးမြင့်ကို တွေ့ရပြီး “ဟင်ကိုမိုးမြင့်ဒီအခန်းထဲရောက်နေ ပါလား” “ဟုတ်တယ်လေ ခင်များအိမ်သာ တက်တာ အခန်းငှားလိုက်ရတယ်”“ဟော့တော်” “ငှားပြီးမှတော့မထူးဘူးခနနေဦး မယ်” “အော် အမ်” ဘာပြောရမှန်းမသိတော့ပေ။
“ကိုမိုးမြင့်အခန်းကတနေ့လုံးငှားရတာလား” “မဟုတ်ဘူးလေးနာရီပဲ” “အော” “လာဗျာ မသီ” “ဟင်ဘာလုပ်မလို့လဲ” “ဟိုတယ် ရောက်မှတော့ခနနားပြီးမှ သွားကြမယ်” “ကိုမိုးမြင့်နားရင်နားလေ” “လာပါဗျာ” ကိုမိုးမြင့်ကျမကိုအိပ်ရာပေါ်ဆွဲခေါ် တော့တယ် “ကိုမိုးမြင့်မဖြစ်ဘူးနှော်” “ဘာဖြစ်လို့လဲ” “အာ ကိုမိုးမြင့်နှော်” “လာပါမသီရာ” ကိုမိုးမြင့်ကကျမကိုပွေ့ချီပြီးကုတင် ပေါ်ခေါ်သွား ကာပက်လက်လှဲချ လိုက်တယ်။ကျမရင်ထဲစိုးရိမ်ထိတ် လန့်ခြင်းတဝက်ရင်ခုန်ခြင်းတဝက် နဲ့ပေါ့။ကျမတွေးလိုက်ပြီဒီအခြေအ နေရောက်မှတော့ကျမအဘုခံရ တော့မည်ကိုပေါ့ အိပ်ရာထဲကိုမိုးမြင့်ကဘေးကအိပ် ပြီးကျမကိုဖက်ထားတယ်။ပေါင်တ ချောင်း တောင်တင်ထားတယ်။ခက် တာကသူ့ဟာကြီးကကျမပေါင်ကို လာထောက်နေတယ်။ကြက်သီးတွေ ထပြီးအာတွေခြောက်လာ တယ်။ “အပျိုကြီး ကြောက်နေတာလား” “အာကြောက်တာပေါ့တစ်ခုခုဖြစ် သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ” “မဖြစ်ရပါဘူး” “ဖြစ်ရင် တာဝန်ယူရမှာ” “အင်းယူမယ်၊ဖြစ်လဲမဖြစ်စေရဘူး” ကျမဘာမှဆက်မပြောတာ့ပေ။ဒီ ကိစ္စမျိုးကိုကြုံဖူးချင်တာတော့ရှိပေ မယ့် ကိုယ်ဝန်ရသွားတာမျိုးကိုမလိုချင်။လင်လဲမလိုချင်ပေ။ ကိုမိုးမြင့်ကျမကိုနမ်းသည်။အစက တော့ပါးပြင်မှနဖူး၊အဲဒီအထိကျမ ငြိမ် ခံနိုင်သည်။ထိုမှတဆင့်လည် ပင်းရောက်လာသောအခါကျမလုံးဝမခံနိုင်ပေ။ယားလည်းယားသည်။
ကျမစိတ်ကပါလာသည်။ဤတ လောကျမစိတ်တွေဖောက်ပြားနေသည်ကိုတော့ကျမဝန်ခံပါရစေ။ တဖြေးဖြေးနှင့်ကိုမိုးမြင့်ကကျ မအဝတ်ကိုချွတ်ရန်ကြံစည်လာပြီး အင်္ကျင်္ီနောက်ကျောဇက်အားဆွဲချ သည်။နောက်တော့ဘရာချိတ်ကိုပါ ဖြုတ်တော့သည်။အ င်္ကျင်္ီကိုမတင် တော့ကျမရှက်သည်။ကျမနို့ပိန် သေးသေးပြားကပ်ကပ်ကိုဘရာစီယာနှင့်ကြီးချင်ယောင်ဆောင်ထား သည်မ ဟုတ်ပါလား။သတိရပြီးအတင်းဆွဲအုပ်ဖုံးသော်လည်းမရတော့ ပေ။နို့ပိန်လေးပေါ်လာသည်။ ထိုနို့ပိန်လေးကိုပင်ကိုမိုးမြင့်ကတ ပြွတ်ပြွတ်စို့သည်။ ကျမနို့စို့မခံဖူးပေ။ယခုလိုနို့စို့ခံရ သည့်အခါကြက်သီးမွှေးညှင်းထရုံ မကပိပိလည်းစိုရွဲသွားတော့သည်။ အတွင်းခံတို့စိုလောက်ပြီကိုမိုးမြင့်ကကျမဝတ်ထားသောထမီစကပ်အ ကွဲကြောင်းထဲလက်ထည့်ပြီးကျမ အဖုတ်ကိုအတွင်းခံ ဘောင်းဘီအ ပေါ်ကနေပြီးလက်နှင့်ပွတ်လေရာ “အာကိုမိုးမြင့်မလုပ်နဲ့တော့” အတွင်းခံဘောင်းဘီအပြင်ထိစိုလာ ၍ကျမကပြော လိုက်သည်။
ကိုမိုးမြင့်ကအတွင်းခံဘောင်းဘီကိုဆွဲချွတ်သည်။ကျွတ်သွားသော ဘောင်းဘီကိုကုတင်ခြေရင်းကိုပစ် လိုက်သည်။ “မသီ “ “ဟင်” ကျမအသံတုန်ပြီးထူးလိုက်သည်။ “လုံချည်ညစ်ပတ်သွားမှာစိုးလို့မို့ ချွတ်လိုက်မယ်နှော်” ကျမဘာမှပြန်မပြောသေးခင်စကပ်ဇက် ကိုဆွဲချပြီးစကပ်ကိုချွတ်ပြန် သည်။ကျမစကပ်ကိုဖိထားလျှင်ပြဲ မည်စိုး၍ခါးကြွပေးလိုက်ရသည်။ ထို့နောက်ကိုမိုးမြင့်ကကျမ ပေါင် ကြားဝင်လာပြီးဒူးထောက်ထိုင်ကာသူ့လီးကြီးကိုကိုင်ပြီးကျမအဖုတ်ကို သေချာကြည့်လေရာ “အာမကြည့်နဲ့လေကိုမိုးမြင့်” “မသီဟာလေးကတော်တော်သေး တာပဲ” မသီတကယ်ရှက်သည်။နို့သေးယုံမ ကအဖုတ်လေးပါသေးသည်။တအုံ လုံးလက်သုံး လုံးခန့်သာရှိသည်။အလို့မခံဖူးသေးသဖြင့်ပိပိအကွဲ ကြောင်းကပူးပြီးကပ်နေသည်။ “ကိုမိုးမြင့်မလုပ်ချင်နေတော့၊ ပေါက်ကရ တွေပြောမနေနဲ့ကျမ ရှက်တယ်” “ဒါမျိုးမှကြိုက်တာ” ကိုမိုးမြင့်ကသူ့လီးကိုကိုင်ပြီးအကွဲ ကြောင်းတလျောက်ချော်ထိုးထိုး လေ ရာအရည်တွေထွက်ပြီးချော ကာအစေ့ကိုထိလေသည်။တခါမျှဤသို့မခံစားဖူးပေ။လူကကော့ပြီးအပေါ်တက်လာသည်။မသီရှက် သွားရတယ်။သူကမသီနို့ကိုလျှာ ဖျားလေးနှင့်ထိတွေ့လိုက် တော့မသီနို့သီးခေါင်းလေးကချွန် လာသလိုနို့တအုံလုံးကြက်သီးဖု တွေထသွားရပြန်တယ်။ကျင်တက် တက်ခံစားမှု့နှင့်အတူအထိအတွေ့ ရဲ့ခံစားမှု့ရသတမျိုးကိုခံစားလိုက်ရ ပြန်တယ်။အလိုလို ညည်းမိတယ်။
“ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ်” “အာ့ အင်းးဟင်းးဟင်းးး” “အာကျမ မနေတတ်ဘူး၊တော်ပြီ” ကိုမိုးမြင့်ကကျမနို့သီးခေါင်းဖျား လေးကိုလျှာနှင့် ထိုးမွှေပြီး ယက်လိုက်နို့အုံတစ်ခုလုံးကိုစို့လိုက် နဲ့လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မသီ တစ်ယောက်အော်ညည်းသံများ ထွက်၍ပင်လာ သည်။ကိုမိုးမြင့်ရဲ့လက်ကမသီရဲ့ပိပိအ ပေါ်ကနေအုပ်ကာပွတ်ပေးလေ တော့မသီတွန့်ကနဲ့ဖြစ်သွားပြီးပိပိတအုံလုံးစိုသွားသလို ခံစားလိုက်ရ ပြီးရင်ထဲသိမ့်သိမ့်တုန်သွားရသည်။ အပေါ်မှပွတ်ရုံမကအကွဲကြောင်းတ လျောက်တဖြေးဖြေးပွတ်ပေးရာပိပိ တအုံလုံးကြွတက်လာလေသလား ထင်မှတ်ရအောင်ဖောင်းကြွလာခဲ့ သည်။အကွဲကြောင်းအလျောက်စုံ ဆန်လှုပ်ရှားပြီးနောက်မှာ အကွဲ ကြောင်းအပေါ်နားအစေ့နာရာနား ကိုလက်ခလယ်ဖြင့်ဖြေးဖြေးချင်း ပွတ်လေရာ “အာ့!အင်း ဟင်းးဟင်းးး” မိမိလုပ်ဖူး သော်လည်း ယခုအထိအတွေ့နှင့်မတူပေ၊စိတ် တို့ချက်ချင်းထကြွလာသည်။မျက်လုံးစုံမှိတ်အော်ညည်းမိသည်။
ထိုစဉ်မှာပင်ကိုမိုးမြင့်သည်မသီနှုတ် ခမ်းအားစုပ်နမ်းလေရာမသီလည်း စိတ်ပါလာပြီးပြန်လည်စုပ်နမ်း လိုက်တော့သည်။တ ဖြေးဖြေးနှင့် မသီကာမစိတ်ကိုတ ဖြေးဖြေးထကြွလာအောင်လုပ် ဆောင်ပေးခြင်းကြောင့်မသီ၏ ကာမစိတ်တို့အထွဋ်အထိပ်သို့ ရောက်ရှိလုနီးနီးဖြစ်လာသည်။ ထိုသို့ဖြစ်နေစဉ်မှာပင်ကိုမိုးမြင့် ကရပ်ပစ်လိုက်သည်။ မသီမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်စဉ် ကိုမိုးမြင့် ကအဝတ်တွေကိုချွတ်ပစ်လိုက်သည်ကိုတွေ့လိုက်သည်။ မျက်လုံးကအလိုအလျောက်ပင် ကိုမိုးမြင့်၏ ပေါင်ကြားနေရာကိုကြည့် စဉ်မှာ ၍ထောင်မတ်နေသောလီးကြီးအားတွေ့လိုက်ရသည်။ အပြင်တွင်ဤမျှကြီးမည်ဟုထင် မှတ်မထားသောလီးသည်ငါးမတ် လုံးမျှမကနိုင်ပေ။အရှည်သည် လည်းခြောက်လက်မစွန်းစွန်းရှိ လောက်သည်။ ကိုမိုးမြင့်က မသီလက်ကိုကိုင်ပြီးလီးပေါ်တင် ပေးရာမသီလည်းအယောင်ယောင် အမှားမှားပင်ကိုင်ထားမိသည်။အထိအတွေ့မှာတခြားသောနေရာများ နှင့်မတူပေ။ပူနွေးနွေး ကလေးနှင့်တမျိုးလေးဖြစ်ရသည်။မသီလက်ကိုဆုပ်ကိုင်ပြီးလက်ကိုလီးအရင်းထိ ဆွဲချလိုက်ရာနီရဲသောထိပ်ဖူး ကြီးကပေါ်လာ ကာဒစ်ကကားကားကြီးဖြစ်နေသည်။ကြက်သီးထမိရသည်။ဤမျှကြီးမည်ဟုထင်မထား မိခဲ့ပေ။
“ဘယ်လိုလဲမသီ” “အကြီးကြီးပဲနှော်” “ပုံမှန်လောက်ပါပဲမသီရယ်”“ကျမကအရမ်းကြီးနေသလားလို့” “မသီကအပြင်မှာမတွေ့ဖူး ဘူးလား” “မတွေ့ဖူးဘူး” “အဖုတ်ကိုနမ်းပေးမယ်” “အာမလုပ်နဲ့” “မသီကြိုက်သွားမှာပါ” “အာ” မသီရှက်သွားရပြန်သည်။အမှန် တော့အနမ်းခံကြည့်ချင်ခဲ့သည်။ကိုမိုးမြင့်ကပေါင်ကြားကိုဝင်ကာ မျက်နှာအပ်တော့မသိစိတ်၏လှုံ့ ဆော်မှု့ကြောင့်မသီပေါင်ကိုဟ လိုက်မိသည်။ ကိုမိုးမြင့်ကမသီပေါင်ကိုမတင်ပြီးစိုရွှဲနေသောမိမိပိပိအားလျှာနှင့် အပြားလိုက်ယက်လိုက်သောအခါ “အားးး! “အားးးလူကတုန်ယင်သွားသည်၊ပူနွေးစို စွတ်သောလျှာကအကွဲကြောင်းတ လျောက်ထိထိမိမိယက်သွားချေ သည်။ထိုနောက် လျှာဖျားကပူးကပ်နေသောနှတ်ခမ်းနှစ်လွှာအကွဲ ကြောင်းတလျောက်တိုးဝင်လာပြီး နှုတ်ခမ်းသားများအားပွတ်ဆွဲသွား ပြန်သည်။ “အားးးအီးးဟီးးဟီးးး” ခါးကလေပေါ်ကြွသွားသည်။ပိပိတို့ မော့ဖောင်းလာသည်။လက်ကအိပ် ရာခင်းကိုသာတင်းတင်းဆုပ်ကိုင် မိ တော့သည်၊ “အာ့! အင်းးဟင်းးးဟင်းးးရှီးးရှီးး” တရှီးရှီးနဲ့အရမ်းကောင်းနေသည်။ အစေ့ကိုလျှာနှင့်ထိုးမွှေပြီးတပြွတ် ပြွတ်စုပ် ပြန်သည်။
“ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ်” “အာ့အိုးးရှီးးရှီးးးအိုးးအားး” “အား အားးရှီးးရှီးးးအားကျမ ကျမ ပြီးတော့မယ် အားရှီးးရှီးးး အားး” တကယ်ပါဒီ လိုပြီးသောအရာသာ မျိုးမတွေ့ဖူးသေးသောမသီအဖို့ စိတ်ကကျေနပ်မိတော့သည်၊မသီ ကြိုက်သွားတာကိုတော့ဝန်ခံပါ သည်။ “ကိုမိုးမြင့် အဝှာလေ၊အဝှာလုပ်ရင် အကာအကွယ်နဲ့လုပ်ပေးပါနှော်” “ဟုတ်ကဲ့ပါ၊ကျနော်ခနကကွန်ဒွန်ယူလာခဲ့တယ်” ကိုမိုးမြင့် ကကွန်ဒွန်ဆိုတာကြီးကိုပြ ပြီးကိုဖောက်ကာ သူ့ရဲ့မာနေတဲ့လီးပေါ်စွပ်ချလိုက် သည်။ထိုနောက်နောက်ထပ်အထုပ်တစ်ထုပ်ကို ဖောက်ပြီးစွပ်ထားသော ကွန်ဒုံးပေါ်မှာသုပ်လိမ်းလိုက်သည် “ကိုမိုးမြင့်ဖြေးဖြေးလုပ်နှော်” “အင်းပါမသီ” ကိုမိုးမြင့်ကမသီပေါင် ကြားဝင် ပြီးပိပိအဝကိုဂျေထပ်သုပ်ပြီးလီးတဲ့ကာတဖြေးဖြေးနှင့်ဖိသွင်းလိုက် သည် “ဗျစ် ဗျစ် ဗျစ်” “အာ့ ဖြေးဖြေးနည်းနည်းနာ တယ်”တဝက်တောင်မဝင်သေးပေ၊ နာတယ်ပြောပြီးမသီကညှစ်ထား သည်။ “စိတ်လျှော့ထားမသီ” “ဘယ်လိုလျှော့ထားရမှာလဲ” ကိုမိုးမြင့်ကလည်းမသီကိုစို့ပြီးမသီပိပိထဲကိုဖိထည့်လိုက်ရာ လီးကတင်းကြပ်ကြပ်ဆို့ဆို့ကြီးဝင် လာပြီးပိပိအတွင်းသားများ ကနာ ကျင်နေတာကြောင့်ကိုမိုးမြင့်ကိုပြောလိုက်မိသည်။
ဗျစ် ဗျစ် ဗျိ” “အာ့! နာတယ်ကိုမိုးမြင့်စူးပြီးအောင့်နေ တာပဲ.ဖြေးဖြေးလုပ်ပါ” လီးကိုတဆုံးအထိသွင်းပြီးမသီရဲ့ နှုတ်ခမ်းကိုနမ်းစုပ် ရင်းတဖြေးဖြေးဖိချလိုက်သည်။။ကျပ်ကျပ် တည်းတည်းပိပိလေးကိုကိုမြင့်လီးကထိုးခွဲပြီးဝင်လာတယ်။ “ဗျစ်..ဗျစ်..ဗြိ ဗျစ်” “အာ့!အီးး အားးး” မသီအသည်းအသန်အော်လိုက်ရ သည်။အဖုတ်တခုလုံးမီးစနှင့်ထိုး သလိုပင်ခံစားလိုက်ရသည်။ သို့သော်ကာမ စိတ်များဖြစ်ပေါ်နေ ခြင်းကြောင့်လားမသိပေ။ခနတာမျှ သာနာပြီးကောင်းလာသည်။မသီကကကိုမိုးမြင့်အနမ်းကို ဖက်၍တုန့်ပြန် မိသည်။ကိုမိုးမြင့်နှုတ်ခမ်းလွှာကြားထဲလျှာထိုးထည့်လိုက်သည်။ကိုမိုးမြင့်ကစုပ်ဆွဲယူ သည်။ကိုမိုးမြင့်လျှာကိုမသီကပြန် စုပ် ဆွဲသည်။မသီစိတ်တို့မတရား ထန်လာသည်။ကိုမိုးမြင့်ကတဖတ် ဖတ်နှင့်လိုးမှကိုမိုးမြင့်ကိုလွှတ်လိုက်သည်၊ စိတ်တို့ထန်ပြီးအဖုတ် ထဲမှပိပိနံရံတို့လှုပ်ရှားကာညှစ်သကဲ့သို့ဖြစ်လာ သည်။မသီစိတ်ထန်ပြီးမိမိနို့ကိုပွတ် ကာညည်းတော့သည်။လီးဝင်သံကတဇွိတဗြိ ဗြိမြည်လာသည်။ပေါင်ချင်းထိကပ်သံတဖန်းဖန်းကြားလာရသည်။ ကိုမိုးမြင့်ကမသီပေါင်ကိုမတင် ပြီးအပေါ်စီးကစိုက်ချလိုး တော့ သည်။လီးဝင်ချက်နက်သည်။တချက်တချက်အောင့်သည်။ သိုသော်ခံရကောင်းလှသည်။ “ဗျစ်!ဘွတ် ဖွတ် ဖန်းးဖန်းး” “အာ့! အိုးးအာ့ရှီးးရှီးးးးရှီးးး” စိတ်ကမနေနိုင်၍အစေ့ကိုပွတ်လိုက် သေးသည်။အရမ်းကိုကောင်းနေ သည်။ကာမအရသာသည် ထိုသို့ရှိ ခြင်းကြောင့်တချို့သောမိန်းမများအရိုက်ခံပြီးလင်ယောက်ျားကို ပေါင်းနေကြမှန်းသိတော့သည်။
မသီကြာကြာပင်အလိုးခံချင်လာ သည်။မိုးမြင့်ပြီးသွားမှာပင်စိုးရိမ်မိသည်။ကိုမိုးမြင့်ကိုကြည့်လိုက်သည်။ မိုးမြင့်ကမျက်စိစုံ မှိတ်၍တချက် ချင်းဆောင့်လိုးသည်။ပိပိနှုတ်ခမ်းသားအတွင်းသို့လိပ်ဝင်သွားသလားမှတ်ရသည်။ ဒစ်ကားကြီးကနှုတ်ခမ်းသား အား ဆွဲယူသွားလိုက်၊ပြန်ထုတ်လာလိုက်ပုံစံဖြစ်သည်။အတွင်းသားတို့အီ ဆိမ့်နေအောင်ကောင်းလှသည်။ မသီအားမရပေ။ကိုမိုး မြင့်ကိုဆွဲဖက်ပြီးနှုတ်ခမ်းအားပြန်စုပ်လိုက် သည်။ဒူးထောက်၍လိုးနေသောကို မိုးမြင့်ညောင်းလာဟန်ရှိသည်။ “ပုံစံပြောင်း ရအောင်မသီ” “ဟုတ် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ” “ကုန်းပေးပါလားမသီ” “ဟုတ်” ကုန်း၍ခံသည်ကိုကြားဖူးသည်။ အောင့်သည်ဟုလည်း ကြားဖူးသည်၊ထိုအချိန်တွင်အောင့်ရင်လည်း အောင့်စေတော့ဟုသဘောထား လိုက်သည်၊ကိုမိုးမြင့်ခိုင်းသောပုံစံ မျိုးကို မှန်း၍ကုန်းလိုက်သည်။ ကိုမိုးမြင့်ကမသီခါးကိုဖိ၍ခွက် ခိုင်းသည်၊ထိုသို့ခါးခွက်လျှင်ပိပိနှုတ် ခမ်းသားတို့နောက်ပစ်ထွက်မည်ကို သိသည်၊လီးကပိပိနှုတ်ခမ်းကြားတရစ်ရစ်နဲ့တိုးဝင်လာသည်။အဆုံးထိမရောက်ခင်ပင်နည်းနည်းအောင့် သည်။သို့သော်မသီအောင့် အည်းသည်းခံလိုက်သည်။အဆုံးထိဝင်သွားမှကိုမိုးမြင့်ကပြန်ဆွဲထုတ် ပြီးဖြေးဖြေးချင်းသွင်းထုတ်လုပ် သည်။တ ဖြေးဖြေးနှင့်အရသာတွေ့လာသည်။
“ဘွတ် ဖွတ် ဖွတ်…ဖတ် ဖတ်” “အာ့ အင်းးဟင်းးးဟင်း” ခါးကိုကိုင်ဆွဲပြီးတချက်ချင်းဆောင့် လာသည်။တင်သားများကိုပွတ်ပေး ပြီးဆုပ်ကိုင်ကာဆောင့်လိုးလာသည်။ပုံစံမတူသောအရသာကိုရရှိုပြန် သည်။လီးကပိုဝင်သလိုခံစားရသည် တဖတ်ဖတ်တဖွတ်ဖွတ် နှင့်အသံ ထွက်သလိုမသီညည်းမိရပြန်သည်။ “ဖွတ်ဘွတ် ဖန်း ဖန်းးဖန်းး” “အင်းးဟင်းးးဟင်းးးအာ့..ရှီးးအား” ဆောင့်ချက်တို့ပို မြန်လာပြီးနောက် မသီမှာ တအာ့အာ့တရှီးးရှီး အော်ပြီး ပြီးသွားရတော့သည်။ မသီပြီးသွားပြီးမကြာမှီပင်ကိုမိုးမြင့် နည်းနည်းပို ကြမ်းလာပြီးလီးကိုဆွဲထုတ်သွားသည်။ထိုနောက်လီးမှအ စွပ်အားဖြုတ်ကာအမှိုက်ပုံးထဲသွား ထည့်ပြီးရေချိုးခန်းဝင်သွားသည်။ ရေချိုးခန်းမှထွက်လာပြီးကုတင် ပေါ်တက်လာကာ “မသီ နာသွားလား” “နာတာပေါ့၊အောင့်နေတာပဲ” ” နောက်ရက်မှသက်သာ သွားမှာ” “အင်း” ကိုမိုးမြင့်ကမသီကိုသူ့ဖက်လှည့်ကာ နို့ကိုစို့ပြန်သည်။ “ကိုမိုးမြင့်မသီနို့တွေလဲနာနေပြီ” “ဟုတ်လား” “မသီကျ နော်ယက်ပေးတာကောင်း လား” “အင်းကောင်းတယ်” “နောက်တစ်ခါလာရင်ရှယ်လုပ်ပေး မယ်မသီ” “အင်း” မသီမငြင်းမိ တော့ပေ၊မသီကြိုက် သွားသည်ပဲလေ။
“မသီကျနော့်ကိုစုပ်ပေးပါလား” “နောက်အခေါက်မှစုပ်ပေးမယ်၊ ခုကဘဏ်ကိုသွားရအုံးမယ်၊နောက် ကျရင်ယောင်းမကကလေးနဲ့ ဈေး ရောင်းရတာအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး” “စတိလေးသာစုပ်ပေး” “အင်းစုပ်ပေးမယ်” မသီအိပ်ရာကထပြီးကိုမိုးမြင့်လီးကို စုပ် ပေးလိုက်သည်။ကိုမိုးမြင့်လီးက ပျော့နေရာကနေပြန်မာလာသဖြင့်ရပ်လိုက်သည်။တော်ကြာနောက်တ ကြိမ်ထပ်လုပ်လျှင်မသီခံ နိုင်မည်မ ဟုတ်ပေ။ထို့ကြောင့် “ကိုမိုးမြင့်သွားရအောင်နှော်” “ခနလေးစုပ်ပါဦး မသီ” “နောက်ကျမှကိုမိုးမြင့်ကျေနပ် အောင်စုပ် ပေးတော့မယ်” “ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ” မသီအိပ်ရာကထပြီးရေချိုးခန်းထဲ ဝင်ကာသန့်ရှင်းရေးလုပ်လိုက်ပြီး အဝတ်များပြန်ဝတ်သည်။ ကိုမိုးမြင့် ကအဝတ်ပြီးပြီဖြစ်၍မသီကိုဘရာ ချိတ်တတ်ပေးပြီးအင်္ကျီဇက်ကိုဆွဲတင်ပေးသည်။ ထို့နောက်အခန်းအပြင်ကိုထွက်ခဲ့ ပြီး ကိုမိုးမြင့်ကားပေါ်သွားထိုင်နေလိုက် သည်။ကိုမိုးမြင့်ကိုဟိုတယ်ဝန်ထမ်း ကမှတ်ပုံတင်လာပေးရာယူလိုက်ပြီး ဘဏ်ရှိရာဆီသို့ မောင်းထွက်ခဲ့လိုက် သည်။ဘဏ်ကစာအုပ်ရပြီးနောက်အိမ်သို့ပြန်လာခဲ့သည်။မသီကိုလမ်း ထိပ်တွင်ချပေးရန်ပြောလိုက်တော့ ကို မိုးမြင့်ကလမ်းထိပ်တွင်ချပေးပြီးအလုပ်ထဲသို့ပြန်သွားသည်။မသီအိမ်ကိုရောက်ပြီးဆိုင်ထွက်သည်။
များမကြာမှီကိုမိုးမြင့်လည်းရောက် လာသဖြင့်ကွမ်းယာယာပြီးကိုမိုးမြင့် ရုံးခန်းဆီသို့ထွက်ခဲ့သည်။ “ကိုမိုးမြင့်ကွမ်းယာလာပို့တာ” “ဟုတ်ကဲ့မသီ၊အဆင်ပြေလား” “နာနေတာပဲ” “ညကျရင်ပါရာလေးသောက်လိုက်” “ဟုတ်ကဲ့ကိုမိုးမြင့်” မသီကွမ်းယာပို့ပြီးခပ် တည်တည်နှင့် ပြန်ထွက်ခဲ့သည်။ညနေအထိကွမ်း ရောင်းပြီးညရောက်တော့ပါရာတစ် လုံးသောက်ကာအိပ်လိုက်သည်။ မနက်ကျ တော့တော်တော်သက်သာ သည်။သက်သာသည်နှင့်ကိုမိုးမြင့်ကိုသတိရမိသည်။ကိုမိုးမြင့်လာမည့် လမ်းကိုသာမျှော်နေမိသည်။မသီ တွေးမိသည်ငါအရူးကိုအမဲသား ကျွေးမိလေသလားတွေးမိတော့ သည်။သို့သော်ကိုမိုးမြင့်ပေါ်မလာ ပေ။ခရီးထွက်နေသည်။တ ပတ် ကျော်ခဲ့သည်။ကိုမိုးမြင့်ကိုသတိရ နေသည်။သူ့တပည့်တွေကိုမေး ကြည့်တော့နှစ်ပတ်ကြာမည်ဟုသိရ သည်။တပတ် လောက်ကြာတော့ ရာသီလာပြီးနှစ်ရက်အတွင်းမှာ ကိုမိုးမြင့်နှင့်အတူအိပ်ခဲ့သည်ကိုည တိုင်းသတိရမိသည်။ဝင်ငွေနည်း နည်းရ လာတော့ယောင်းမကိုပြော ပြီးအမေနှင့်ညီမကိုရန်ကုန်အလည် ခေါ်လိုက်တော့အမေနှင့်ညီမရောက် လာသည်။အမေနှင့်ညီမကို ဘုရားဖူးလိုက်ပို့လိုက်သေးသည်။အခုဆို လျှင်ညီမဖြစ်သူကပါဆိုင်မှာကူ၍ ဈေးရောင်းပေးရာနေ့လည်ခင်းဆို လျှင်အားနေပေ တော့သည်။ကိုမိုးမြင့်ကနှစ်ပတ်ကြာပြီးပြန်ရောက် ချိန်တွင်ကွမ်းယာသွားပို့တော့ “မသီ မနက်ဖြန်နေ့လည်အားလား” “အားတယ် လေ၊အခုညီမလေးဆိုင် ထိုင်ပေးနေတယ်”
“ဟုတ်လားအိုးမကွဲတော့အဆင်ပြေတာပေါ့၊အဲဒါဆိုမနက်ဖြန်အ ပြင်သွားရအောင်” “သွားလေ” “မသီအိမ်ကိုဘယ်လိုပြောခဲ့မှာလဲ” “ဘဏ်ကိုငွေသွားသွင်းမယ်လို့ပြော လိုက်မယ်၊ပြီးတော့ဆိုင်အတွက် ပစ္စည်းနည်းနည်းဝယ်မယ်ပြော လိုက်မယ်” “အချိန်နည်း နည်းကြာမယ်ပြော ထားပေါ့” “အင်း “ “မနက်ဖြန်ကိုးနာရီအရင်နေရာက စောင့်မယ်” “အင်းစောင့်၊လာခဲ့မယ်” ကိုမိုးမြင့်ချိန်းတာကို ကျမမငြင်းနိုင် ကျမကိုယ်တိုင်ကတွေ့ချင်နေပြီ။ နောက်နေ့ကျတော့မနက်ကိုးနာရီကို ကိုမိုးမြင်နဲ့ချိန်းထားသောနေရာမှာ စောင့်နေ လိုက်တော့ကိုမိုးမြင့် ရောက်လာတယ်။ “မသီဈေးအရင်သွားလိုက်လေ” “ဘဏ်ကိုအရင်သွားလိုက်မလား လို့” “ဘဏ်ကသွားစရာ မလိုဘူး၊ငွေ ထည့်မှာမဟုတ်လား” “ဟုတ်တယ်လေ” “ဘယ်လောက်ထည့်မှာလဲ” “နှစ်သိန်း” “ကျနော့်ကိုပေး” “အမ် ဘာဖြစ်လို့” “ကျနော့်ကဒ်ထဲကပြန်လွှဲပေးမယ်” “အဲလိုရလား” “ရတယ်” “အဲဒါဆိုဈေးအရင်သွားမယ်” ဈေးအရင်သွားလိုက်ပြီးဝယ်စရာရှိတာ ဝယ်ပြီးကားပေါ်တင်ခဲ့လိုက် သည်။ပြီးတော့တနေ့ကဟိုတယ်ကို ပဲသွားလိုက်ကြတယ်။ဟိုတယ် ရောက်တော့ “မသီ အင်္ကျီတွေ ကိုချွတ်ပေးမယ်” “အာရေချိုးခန်းအရင်ဝင်အုံးမယ်၊
ချွေးနံ့တွေနဲ့ညစ်ပတ်နေမှာ” “အင်းဝင်လိုက်လေ” မသီရေချိုးခန်းဝင်ပြီးအဝတ်တွေ ချွတ်ကာအောက်တပိုင်းလုံးကိုရေနဲ့လောင်းချ လိုက်ပြီးဆပ်ပြာနှင့်သေ ချာဆေးကြောလိုက်တယ်။ရေစင် အောင်သုတ်ပြီးသဘက်ပတ်ထွက် ခဲ့တယ်။ကိုမိုးမြင့်ကလည်းရေချိုး ခန်းဝင်တယ်။ပြန်ထွက်လာတော့ အဝတ်တောင်မပါပေ။မသီကကု တင်ပေါ်မှာအိပ်နေလိုက်သည်။ကို မိုးမြင့်လာတော့ဆီးဖက်ထား လိုက် သည်။ကိုမိုးမြင့်ကမသီကိုနမ်းတယ် မသီလည်းလွမ်းနေသည်မဟုတ် လား။နှုတ်ခမ်းချင်းနမ်းစုပ်ကြသည်။မသီအဖုတ်က အလိုလိုနေရင်းစို လာသည်။အထိအတွေ့ကမသီရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသည်။မသီနို့တွေကိုမိုးမြင့်ကစို့သည်။အရင်လို မယားပဲ စိတ်ပိုကြွစေသည်။အဖုတ်ကိုကိုင်ပွတ်သည်၊အကွဲကြောင်းလက်နှင့်ထိုး၍မွှေပေးရာမသီမှာစိတ်တွေကြွသထက်ပိုကြွလာရသည်။ ကို မိုးမြင့်လီးကြီးကိုအသာအယာဆုပ် ကိုင်ပေးလိုက်ပြီးဆွပေးလိုက်သည်။
လီးကြီးကမာန်ဖီသလိုဖြစ်ပြီးကြီး၍ မာလာသည်။ “မသီ” “ဟင်” “စုပ်ပေးပါလား” “အင်း” အပိုမဆိုတော့ပေ။အိပ်ရာကထပြီး မိုး မြင့်လီးကိုတပြွတ်ပြွတ်စုပ်ပေး လိုက်သည်။ဒစ်ကြီးကိုငုံ၍စုပ်ရ သည်ကိုလည်းအားရသည်။လျှာ ဖျားနှင့်ထိုးမွှေပေးလိုက်သည်။ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ်” “အားးရှီးးးရှီးးးကောင်းလိုက်တာမသီရယ်”တရှီးရှီးတအားအားညည်းနေသ ဖြင့်မိုးမြင့်ဝဋ်လိုက်သည်ဟုထင် လိုက်သည်။ပိုအားရပြီးစုပ်ပေး လိုက်သည်။လဥကလေးကိုဆုပ်ကိုင်ညှစ်ရသည်ကိုလည်းအရသာ တွေ့သလိုခံစားရသည်။ “မသီ ရေကောင်းလိုက်တာဗျာ၊အခုမသီကိုပြန်လုပ်ပေးမယ်၊မသီပက် လက်အိပ်လိုက်” မသီသူပြောသလိုအိပ်လိုက်သည်။ မသီဖင်အောက်ခေါင်းအုံးခုသည်။ မသီဖင်ကြီးကအပေါ်မြောက်တက် ကာအဖုတ်ကြီးကိုပင်မြင်ရသည်။ ကိုမိုးမြင့်ကမှောက်လျက်ပင်မသီ အ ဖုတ်ကိုယက်သည်။အကွဲကြောင်း တလျှောက်လျှာနှင့်ထိုးမွှေသည်။ “ပလပ်၊ပလပ် ပြွတ်ပြွတ်” “အာ့ရှီးးရှီးးးး” ဒီတစ်ခါညည်းရ သူကမသီပင်ဖြစ် သည်။အဖုတ်အကွဲထဲလျှာကိုဝင်နိုင် သမျှဝင်အောင်ထိုးမွှေသွားတော့ မသီထွန့်ထွန့်လူးရသည်။အစေ့ကို တပြွတ်ပြွတ်စုပ်ပြန်သည်၊အရည် တွေတစိမ့်စိမ့်ထွက်မှန်းမသီသိသည်။အမှန်အကန်ကိုကြိုက်သွားရသည်။မသီကကောင်းလွန်း၍ခါးကို မြှောက်မိသည်။မိုးမြင့်လျှာက မသီဖင်ဝကိုသွားယက်မိသည်။
ထိုအရသာသည်လည်းတမျိုးတော့ကောင်းသည်။ “မသီကောင်းလား” “အင်းး” တအာ့အာ့ညည်းရင်းဖြေရသည်။ “မသီကျနော့်အပေါ်ကတက်ခွပေး” “အာ..အားနာစရာကြီး” “ရတယ်တက်” မသီကမိုးမြင့်အပေါ်ကနေခွပြီး မိုးမြင့်ပါးစပ်နှင့်ချိန်ပြီးကုတင်ခေါင်းရင်းကဘောင်ကိုကိုင်ပြီးထိုင်ချ လိုက်တဲ့အခါကိုမိုးမြင့်ကကျမအ ဖုတ်ကိုလျှာနှင့်ထိုးမွှေပေးတော့ တယ်။ “ပလပ် ပလပ်” “အိုး!အားးးရှီးးရှီးးး “ ကျမအရမ်းကြိုက်သွားတောတယ်။ တချက်တချက်ကျမကိုယ်တိုင်ဖင် ကိုလိုက်ရွှေ့ပေးတယ်။အရည်တွေ လည်းတစိမ့်စိမ့်စီးထွက်လို့လာ တယ်။အောက်ကိုငုံ့ကြည့်ပြီးမိုး မြင့်အသက်ရှူရမခက်အောင်လည်း ကြွပေးရတယ်။တချက်တ ချက်အ နေအထားပျက်ပြီးသူ့လျှာကကျမ ရဲ့ဖင်ဝတည့်တည့်ကိုထိုးမွှေမိပြန် သည်။ဒီအရသာကလည်းစိတ်ကို ပိုကြွစေမှန်းကျမပို သတိထားမိ တယ်။
“ပလပ် ပလပ်” “အာ့ရှီးးရှီးးးးးရှီးးး” မသီအရမ်းကိုစွဲလန်းမိတဲ့အရာတခုဆိုတာဝန်ခံမိတယ်။ “မသီ ကျနော်တို့လိုးရအောင်” “ဟုတ်၊ ကျမဘယ်လိုနေပေးရမလဲ”“အပေါ်ကတက်လေ” “ဟုတ်ကဲ့” ကျမကိုမိုးမြင့်အောက်ကိုလျှောချ ပြီးအဖုတ်နဲ့လီးကိုတေ့ကာထိုင်ချ လိုက်သည်။ “ဗျစ် ဗျိ ဗျိဗြစ်” “အာ့ အားလားးလားး” လီးကအဖုတ်ထဲတအိအိဝင်သွား သည်၊အဆုံးထိရောက်တော့ပြန်ကြွ လိုက် သည်။မိုးမြင့်ကကျမခါးကိုကိုင်ပြီးပင့်လိုက်အောက်ချလိုက် လုပ်ပေးသဖြင့်ကျမကသက်သက်သာသာဖြင့်အပေါ်အောက်ကြွကာ လုပ်ပေးလိုက်တော့သည်။ဒီနေ့အရ သာကပို၍ထူးခြားသည်။ လုပ်နေရင်းမှသတိရလာသည်က ကမိုးမြင့်ကလီးကိုအစွပ်မစွပ်ထား သည်ကိုသတိရမိသည်။ “ဟာအစွပ်လဲမပါဘူး” “လုပ်စမ်းပါမသီ၊ပြီးသွားရင်အပြင် ကိုထုတ်ပစ်မယ်” ကျမလည်းပြန်ပြီးလုပ်ပေးရာ ငါးမိ နစ်ခန့်ပဲကြာသည်။လူကညောင်း လာသည်၊ “ညောင်းနေပြီမရတော့ဘူး” “ညောင်းရင်ဆင်းလိုက်ကျနော်လိုး မယ်” မသီ ပက်လက်အိပ်ပေးလိုက်သည်၊
မိုးမြင့်ကမသီပေါင်ကြားဝင်ပြီးဒူး ထောက်ကာလိုးသည်။လိုးရင်းပင် မသီရဲ့အစေ့နေရာကိုပွတ်သည်။ “ဖွတ် ဘွတ် ဖန်းးဖန်းးး” “အာ့ အိုးးးရှီးးးရှီးးးး” တကယ်ပင်ကောင်းသည်၊အစေ့အ ပွတ်ခံပြီးအလိုးခံရသဖြင့်မသီပြီး ချင်လာသည်။မသီအသံတွေသိသိ သာသာထွက်ပြီးညည်းသည်။မိုးမြင့် ဆောင့်ချက်ကလည်းပြင်းသည်။ အရမ်းကောင်းလှသဖြင့်မသီအော် ညည်းရင်းပြီးသွားတော့သည်။ မသီပြီးသွားတော့ကိုမိုးမြင့်ပြီးသွား မှာစိုးရိမ်လာသည်။ “ကိုမိုးမြင့်ပြီးခါနီးအပြင်မှာထုတ် နှော်” “ကျနော်ပြီးတော့မယ် မသီ” ကိုမိုးမြင့်ကကျမအဖုတ်ထဲကလီးကို ထုတ်ပြီးပက်လက်အိပ်နေသောကျ မအပေါ်ခွတက်လာကာကျမပါးစပ် ထဲလီးထည့် တော့ကျမပါးစပ်ဟပေး လိုက်သည်။မိုးမြင့်ကကျမပါးစပ်ထဲ ဖြေးဖြေးလေးလိုးနေသည်၊နှစ်မိနစ် ခန့်ကြာသောအခါမိုးမြင့်လီးက သုတ်တွေပန်းထွက်ပြီးကျမပါးစပ်ထဲဝင်သွားတော့သည်၊ကျမထွေး ထုတ်ရန်ပြင်သော်လည်းမိုးမြင့်ကဆက်လိုးနေသဖြင့်ကျမမှာ ထွေးမထုတ်နိုင်တော့ပဲမျိုချရတော့သည်။စေးပျစ်ပျစ်သုတ်များအာခေါင်ကတဆင့်လည်ချောင်းထဲဝင်သွား သည်။ ကိုမိုးမြင့်ကသူ့ လီးပျော့ခွေသွားမှသူ့လီးကိုထုတ်သွားကာအိပ်ရာပေါ် လှဲချသည်။ထိုအခါမှကျမလည်း အိပ်ရာကထပြီးရေချိုးခန်းဝင်ကာ အာလုပ်ကျင်းရသည်၊ထိုနောက်ရေ သောက်ကာအိပ်ရာထဲပြန်လှဲလိုက် သည်။
“မသီထွေးထုတ်လိုက်တာလား” “မထွေးလို့မဖြစ်ဘူးစေးကပ်နေတာ” “အရသာဆိုးသလားလို့ပါ” “အနံ့သိပ်မရှိဘူး၊အရသာလည်း မရှိ ဘူးစေးကပ်နေလို့” “မသီအာခြောက်နေလို့နေမယ်” “ဟုတ်တယ်ကိုမိုးမြင့်” “ခနနားကြမယ်မသီ၊နည်းနည်းမော သွားတယ်” “အင်းလေ” ကိုမိုးမြင့်အိပ်ရာပေါ်ကထပြီးရေခဲ သေတ္တာထဲကအချိုရည်ဘူးများကို ဖောက်ကာကျမကိုတစ်ဘူးပေးပြီး သူလည်းတစ် ဘူးသောက်သည်။ ထို့နောက်တော့ “မသီကိုပိုက်ဆံလွှဲလိုက်မယ်၊မသီ ရဲ့အကောင့်နံ့ပါတ်ပြော” မသီအကောင့်နံပါတ်ပေးလိုက်တော့ သူကငွေလွှဲပြီး “မသီဖုန်းထဲကြည့်လိုက်ငွေရောက် သလားလို့” “ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲ” မိုးမြင့်ကပြရာမသီကြည့်လိုက်တော့ ငွေဝင်နေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်။စကားခနပြောပြီး “မသီထပ်လုပ်အုံးမယ်” “အာကွန်ဒွန်လဲမရှိပဲနဲ့” “ခနလေး ဟိုတယ်ကကောင် လေးကိုမှာလိုက် မယ်” ဘေးမှာရှိတဲ့တယ်လီဖုန်းကိုကိုင်ပြီး ဆက်သည်။ခနအကြာတွင်တံခါး လာခေါက်ရာမိုးမြင့်ကလုံချည်ထ ဝတ်ပြီးသွားသည်၊ချက်ချင်းပြန်လာ တော့လက်ထဲအထုတ်နှစ်ထုတ်ပါ လာသည်။
“မသီ ကနော့်ကိုမှုတ်ပေးဦးဗျာ” “အင်းမှုတ်ပေးမယ်” မသီကကိုမိုးမြင့်ပေါင်ကြားထဲကို ဝင်ပြီးလီးကိုစုပ်သည်။ဂွေးဥကိုပါ စုပ်ပေး ရာမိုးမြင့်ကပေါင်ကား၍ မြှောက်ပေးသည်။မသီသိလိုက် သည်။ဂွေးဥနှင့်ဖင်ကြားကိုစယက် ပေးလိုက်သည်။စအိုဝကိုမူမယက် မိ အောင်ရှောင်သော်လည်းမိုးမြင့်ကမသီခေါင်းကိုနှိမ့်ကာလုပ်ခိုင်းသဖြင့် မသီလုပ်ပေးလိုက်သည်။မိုးမြင့်လီးကအရမ်းကိုမာတောင် လာသည်။ “မသီကိုမှုတ်ပေးဦးမယ်” “မသီကုန်းလိုက်” မသီကုန်းပေးလိုက်သည်။မျက်နှာကိုတဖက်လှည့်စောင်းပြီးကုတင် ပေါ်တွင် ကပ်နေစေကာခါးကိုခွက် ပေးထားသည်။ထိုအခါမှမသီအ ဖုတ်အပြင်ကိုပြူးထွက်ပြီးမိုးမြင့် ယက်လျှင်အဆင်ပြေမည်။မိုးမြင့်ကမ သီဖင်နောက်မှနေ၍အဖုတ်ကိုယက်ရင်းဖင်ကိုပါလျှာနှင့်ထိုးသည်။ အဖုတ်ကိုလျှက်ဖင်ထဲလက်ညှိုးထိုး မွှေသည်။မသီဒီကိစ္စကိုသိ သည်။ မိုးမြင့်ဖင်လိုးချင်၍ခွင်ဆင်နေသည်မှန်းကိုမသိချင်ယောင်ဆောင်ပေး လိုက်သည်။မသီဒုတိယအကြိမ်ပြန် ပြီးစိတ်ထလာ သည်။အဖုတ်ယက် ခံရင်းညည်းမိသည်။
“မိုးမြင့် လုပ်လို့ရရင်လုပ်တော့ဟာ” “အင်း လုပ်မယ်လေ”“လာဒီနေရာမှာဒီလိုအိပ်ပေး” မိုးမြင့်ပြသကဲ့သိုမသီနေပေး လိုက် တယ်။ကုတင်မှာအတည့်မအိပ်ပဲကန့်လန့်အိပ်ရတာပါ။ပြီးမှမိုး မြင့်ကခေါင်းအုံးတစ်လုံးယူပြီး ခါးအောက်မှာခုတယ်။ခြေနှစ် ချောင်း မိုးပေါ်ထောင်ပြီးလက်တ ဖက်နှင့်ရင်ဘတ်ပေါ်ပိုက်အပ်ကာနောက်လက်နှင့်လီးကိုကိုင်ပြီးအ ဖုတ်ဝမှာတေ့ပြီးဖိသွင်းတယ်။ဒီတစ် ခါပုံစံအသစ်ပါပဲ။လီးဝင်သွားတော့မှခြေနှစ်ချောင်းရှေ့တွန်းပြီးလိုး တော့တယ်။ “ဗျစ် ဗျစ် ဘွတ်ဖတ် ဖွတ်” “အားးးအိုးး…” တင်း ကြပ်ကြပ်ခံစားမှု့ကမပျောက် လီးဒစ်တိုးဝင်လာပြီးပြန်ထွက်တော့ အတွင်းသားတွေကိုဆွဲယူသွားသလိုပါပဲ။တထစ်ထစ်နဲ့ ရသာ တွေ့ရ ပြန်တယ်။မိုးမြင့်ဒီကိစ္စမျိုးမှာ အတော်ကျွမ်းကျင်တဲ့အဆင့်ရှိမှန်း မသီတွေးမိတယ်။ဘယ်သူတွေ ကိုများလုပ်ဖူးသလဲတွေး နေတုန်း တဒုတ်ဒုတ်နဲ့တိုးဝင်လာတဲ့လီး ကြောင့်အတွေးကိုပင်မေ့ပြီးကာမအလိုကျပါသွားရတယ်။ဒီတကြိမ်လိုးချက်ကတော်တော် ကြာတယ်။
မတ်တပ်ရပ်လိုးရလို့လားမသိ၊မိုး မြင်ညောင်းဟန်ပင်မပြ၊မသီ မှာသာပြီးလုလုဖြစ်လာပြီးညည်း မိတော့တယ် “”ဘွတ် ဖတ် ဖတ်..ဖန်း ဖန်းး” “အာ့!အင်းးဟင်းးဟင်းးးမိုးမြင့်ငါပြီးတော့မယ်၊အတူတူပြီးရ အောင်ဟာ” “အင်း ကျနော်နည်းနည်းကြမ်းမယ်” “အင်းကြမ်းလေ” မိုးမြင့်ကမသီပေါင်ကိုပြန်ကားပြီးကျောအောက်ကနေလက် နှိုက်ပြီးပုခုံးကိုဆွဲကာကြမ်းကြမ်း လေးလိုးတော့ တယ်။ဆောင့်ချက် တွေကြမ်းလာသည်နှင့်အမျှမသီ လဲအော်ညည်းသံတွေပိုထွက် လာခဲ့တယ်။ငါးမိနစ်ခန့်ဆက်တိုက် လိုးလိုက်တဲ့ အခါမသီကမိုးမြင့် ကျောပြင်ကိုလှမ်းဖက်လိုက် တယ်။တကယ်ကိုလည်းကာမအရ သာကိုကောင်းစွာခံစားရပြီးနောက် “ဘွတ် ဖွတ် ဖန်းဖန်းးးးး”“အာ့ အိုးးအီးးးပွီးးပွီ အိုးးးးး” မသီတကယ်ကိုပြီးသွားတယ်။ မိုးမြင့်လည်းအချက်ငါးဆယ်ခန့်မ နားတမ်းလိုးလိုက် ပြီးနောက် မသီ၏ဖင်ဝကိုလီးတေ့ကာဖိသွင်းသည်။ “အားးး နာတယ်ဟ၊မလုပ်နဲ့” လီးကလက်တဆစ်ခန့်ဖင်ထဲဝင်လာသည်။ မီးနဲ့ ထိုးသလိုခံစားရသဖြင့်မသီက ရုန်းကန်လိုက်သည်။ “မရဘူးလားမသီ” “မရဘူးမိုးမြင့်ကွဲသွားလိမ့်မယ်” “အဲဒါဆိုလဲထပ်စုပ်ပေးဦး ဗျာ” “အေးစုပ်ဆိုလဲစုပ်ပါ့မယ်ဖင်တော့ မလိုးပါနဲ့” “ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ” မသီ မိုးမြင့်လီးကိုဂွင်းထုသလိုလုပ်ရင်းစုပ်လိုက်သည်။သိပ် ကြာခင်မှာမိုး မြင့်ရဲ့သုတ်ပူနွေးနွေးလေးများမသီ ပါးစပ်ထဲတဖြောဖြောထဲစီးဝင်သွားတော့တယ်။မသီမှာမိုးမြင့်ကြောင့် ကာမ အရသာကိုနဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ခံစားမိရတော့တယ်။နောက် တော့ရေချိုးခန်းထဲရေဝင်ချိုးလိုက် ကြပြီးအိမ်ပြန်ခဲ့ကြသည်။
ဒီလိုနဲ့နှစ်ပတ်တကြိမ်ခန့်မိုးမြင့်နှင့် မသီချိန်းပြီးပစ္စည်းဝယ်ရန်အ ကြောင်းပြ၍တမျိုး၊ဘဏ်ငွေသွင်း ရန်အကြောင်းပြ၍တဖုံကာမ အရ သာကိုခံစားနေကြသည်မှာသုံးလခန့်ကြာခဲ့သည်။ နောက်တော့မိုးမြင့်အားသူ့အကိုမှ နယ်ကိုလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုကြီးကြပ် ခိုင်းရာ မိုးမြင့်နယ်ကိုထွက်သွားရသည်။မိုးမြင့်မရှိတော့မသီလည်း ပျင်းလှသည်။အမေနှင့်ညီမရွာပြန် ချင်လာတော့မသီကသကြန်နာနီး မှ ပြန်ပို့မည်ပြောသည်၊မိုးမြင့်က နှစ်စ်လခန့်ကြာမှပြန်ပေါ်လာပြီးပြန် ထွက်သွားပြန်သည်။သကြန်နီးတော့ မသီအမေနှင့်ညီမကိုရွာပြန် ပို့ပြီးရွာ တွင်စပါးရောင်းခြင်းနွားများဝယ် ယူခြင်း၊စသည့်အလုပ်ကိုလုပ်ရင်း ကြာနေရာမှထိုအလုပ်များကိုကူညီပေးသောသူနှင့်တ ပူးပူးနေရင်းက အစရှိခဲ့ပြီးပြီမို့ကာမစိတ်ကိုမထိန်း နိုင်တော့ပဲလုပ်မိရာလူမိသွားသော ကြောင့်အိမ်ထောင်မပြုချင်ပဲအိမ် ထောင်ပြု လိုက်ရတော့သည်။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged အပြိုကွီးရဲ့အထူးလကျဆောငျ